अव आफैलार्इ चिन्नुहोस्, राशिअनुसार, व्यक्तित्व, जीवन र व्यवसाय - Muldhar Post
अव आफैलार्इ चिन्नुहोस्, राशिअनुसार, व्यक्तित्व, जीवन र व्यवसाय
धर्मदर्शन २०७४, १८ पुष मंगलवार 1163 पटक हेरिएको
व्यक्तित्व भन्नाले व्यक्तिमा रहेको उसको गुण, अवगुण र उसको चरित्र हो । कुनै व्यक्तिलाई हेर्ने विक्तिकै उसको बारेमा अनुमान लगाइन्छ कि ऊ यस्तो होला वा त्यस्तो होला । व्यक्तिको रुप, रंग, कदकाठी, चालढाल उसको बाहिरी व्यक्तित्व हो भने क्रोधी, संयमी, सहनशील, निडर, स्पष्ट, शान्त, अन्तर्मुखी या बहिर्मुखी, मिलनसार, संकुचित, परम्परावादी, काल्पनिक, व्यवहारिक, रचनात्मक, विध्वंसक आदि चरित्र उसको भित्री व्यक्तित्व हो । यी सबै कुराबाट के थाहा हुन्छ भने हरेक व्यक्तिको आफ्नै प्रकारको गुण या अवगुण हुन्छ जसले यसलाई अरु भन्दा फरक, भिन्न बनाउँछ । ज्योतिषशास्त्रबाट व्यक्तिको राशि अथवा जन्मकुन्डलीको आधारमा ग्रहको अवस्थाबाट व्यक्तित्वको पूर्वानुमान गरिन्छ । ज्योतिषहरुको भनाईमा ग्रहको अवस्था या चालले व्यक्तिको व्यक्तित्वमा प्रभाव पार्छ । पूरा जीवनमा प्रभाव पार्छ । यसैले सामाजिक संस्कार, विवाह, व्रतबन्धमा लगायत कुनै पनि कार्यमा जन्मकुन्डली तथा राशिफलको सहयोग लिइने गरिन्छ । हरेक व्यक्ति आफ्नो बारेमा जान्न चाहन्छ । कति कुरा उसलाई स्वयम थाहा हुन्छ भने कति कुरा थाहा हुँदैन । यसलाई सहयोग पुर्याउँछ उसको राशि या जन्मकुन्डलीले । हामीले यहाँ राशि र राशि अनुसारको व्यक्तित्व विश्लेषण र उसको सामान्य व्यवहारको बारेमा चर्चा प्रस्तुत गरेका छौं ।
मेष राशिको स्वामी मंगल हो र यसको कारण मेष राशिका व्यक्ति अग्नितत्वले संचालित हुन्छन् जसको कारण यिनीहरु अत्यन्त उर्जावान् हुन्छन् । हरेक कार्य गर्नमा यिनीहरु एक विशेष प्रकारको तेजी र फुर्ति देखाउँछन् । जसबाट यिनीहरुको उत्साहको परिचय मिल्छ । निर्भिकता यिनीहरुको व्यक्तित्वको महत्वपूर्ण गुण हो र यिनीहरु निर्भय हुनुका साथै साहसी पनि हुन्छन् । मेष राशिवाला स्वाभिमानी र मेहनती हुन्छन् तर कुनै काममा निरन्तरता र स्थायित्व बनाई राख्नको लागि यिनीहरुलाई धेरै संघर्ष गर्नुपर्ने हुन्छ । यिनको स्वभावमा रहेको चंचलता यसको कारण हो । यिनीहरु छिट्टै आवेशमा आउँछन् । रिस त यिनीहरुको नाकको टुप्पोमा रहन्छ तर रिस शान्त पनि तुरुन्तै हुनेगर्छ । मेष राशिको राशि चिन्ह भेडा हो जो एक जुझारु हुनुको लक्षण प्रकट गर्छ । यिनीहरुको व्यक्तित्वको एक खास भाग यो पनि हो कि यो राशिवाला व्यक्ति आफ्नै शर्त या पारामा जिउन मन पराउँछन् । एकपटक जब सोच्ने गर्छन् तब त्यसलाई पूरा गर्नमा क्षणभर पनि ढिला गर्दैनन् । व्यक्तित्वमा भएको चंचलताले गर्दा कुनै काम हुनमा ढिलाई भएमा त्यसबाट यिनीहरुको मन भरिन्छ या मर्दै जान्छ । किनकी यिनीहरु आफ्नो चंचल व्यक्तित्वको कारण प्रतिक्षा गर्न सक्दैनन् । एकातिर आफू भएको उर्जा, निर्भिकता र निर्दोषपनाले यिनीहरु अरुलाई आफूतिर आकर्षित गरि आफ्नो दिवाना बनाउँछन् त्यहिं धेरै रिस आवेश र हतारको कारण मानिसहरुबाट टाढिन पनि पुग्छन् । उनीहरु प्रतिको मोह, चाहनामा कमि आउन पुग्छ । मेषराशि भएकाहरु उत्साही र मेहनती भए तापनि यिनीहरुलाई आफ्नो जीवनमा धेरै नै समस्याहरु बेहोर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो अवस्थामा यिनीहरुको सहनशीलताले ठूलो साथ दिनेगर्छ । यो साँचो हो कि यस राशिका व्यक्तिहरु आत्मकेन्द्रित हुने गर्छन् । तर यसको मतलब यो होइन कि यिनीहरुमा संवेदना हुँदैन । यिनीहरु अत्यन्त संवेदनशील हुन्छन् र आवश्यकता पर्दा आफ्नो उदारताको परिचय पनि दिने गर्छन् । अपठ्यारो समयमा यिनीहरुलाई सहानुभूतिको आवश्यकता पर्ने गर्छ तर यसको मतलब दयाभावको होइन । आफूलाई दयाभाव देखाउनेलाई यिनीहरु मुखभरिको जवाफ दिन पनि पछि पर्दैनन् । यिनीहरुको जीवनमा धेरै प्रगती गर्न सक्छन् र यसको सबै संभावना र विशेषताहरु यिनीहरुमा रहन्छन् तर यसको लागि यस राशिका व्यक्तिहरुले धैर्यता र संमयमता राख्नु अत्यन्त आवश्यक रहन्छ । मेष राशिका व्यक्तिहरु अत्यन्त साहसी र निर्भिक हुन्छन र आफ्नो कार्यक्षेत्रमा अत्यन्त उर्जावान् रहन्छन् । यस राशिका व्यक्ति खेलाडी भए उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्छन् । दुश्मनहरुसँग मुकाविला गर्न सक्ने क्षमता पनि यिनीहरुमा हुन्छन् यसैले सैन्य क्षेत्रमा पनि यिनीहरु प्रगती गर्न सक्छन् । यिनीहरुको व्यक्तित्को गुणमा सुरुवाती आकर्षण हुन्छ तर अगाडीमा मानिसहरुले सम्झनमा केही अप्ठ्यारो रहन्छ । तर एक पटक नजिक र आत्मिय भए पछि साथ दिनमा सदा तत्पर रहन्छन् । तर मित्रहरुबाट धेरै नै आशा राख्ने हुन्छन् ।
आमाबुबाको लागि मेष राशिका छोराहरुको साथ दिन धेरै मुश्किल हुन्छ । किनकी यिनीहरुमा धेरै ज्यादा उर्जा हुन्छ र यिनीहरुलाई रिस पनि छिट्टै उठ्छ । यिनीहरु रिसाए भने यिनीहरुको सामना गर्न धेरै गाह्रो हुन्छ । यिनीहरु अत्यन्त प्रतिभावान् हुन्छन् तर हतारका कारण आफैलाई नोक्सान पुर्याउँछन् । यस राशिका नवयुवा आफ्नो जीवनलाई एक लामो प्रतिस्पर्धाका रुपमा हेर्छन् र सधैं विजयी भएर अगाडी आउन चाहन्छन् । यसको कारण बेला बेलामा यिनीहरु तनावको अवस्थामा पनि पुग्छन् । यिनीहरु जन्मै देखि लिडर हुन्छन् र सदैव जिम्मेवारीको लागि तयार रहन्छन् । त्यो चाहे खेल होस् या कुनै सामाजिक कार्य, यिनीहरु सधैं नै कुनै न कुनै जिम्मेवारीको काम गरि रहेको देखिन्छ । यिनीहरु हरेक कार्यलाई आफ्नो तरिकाले गर्न चाहन्छन् यसैले कहिले काहिं यिनीहरु आत्मकेन्द्रित पनि हुन पुग्छन् । यदि कसैले यिनीहरुलाई चुनौती दिएमा यिनीहरु हमेशा स्वीकार्नको लागि तयार रहन्छन् । मजबुती, ताकत, दृढ इच्छा शक्ति, उत्साह तथा उर्जा मेष राशिको व्यक्तिको विशेषताहरु हुन् । यिनीहरु धेरै स्थानमा भ्रमण गर्छन् । मेष राशिका युवतीहरु एक जिउँदो तार जस्ता हुन्छन् अत्यन्त उर्जावान् । यिनीहरुमा साहस र उर्जाको कुनै कमि हुँदैन । यिनीहरुका धेरै प्रशंसक हुन्छन् । यिनीहरुमा स्वतन्त्रताको भावना हुन्छ तथा आफ्नो काम आफ्नै हिसाबमा गर्ने हुन्छन् । विद्यालयमा पनि लिडरको रुपमा देखेमा अनौठो मान्नु पर्दैन । मेष राशिका युवतीहरु आफ्नो मेकअपको लागि बढी सतर्क हुन्छन् । कहिले काहिं यिनीहरु थोरै मात्रामा आत्मकेन्द्रित हुन्छन् । यिनीहरुलाई आफ्नो कपडा आफ्नै बहिनीसँग बाड्न पनि मन पर्दैन र कहिले काहिं त कुरा यति अघि बढ्छ कि यस्तो अवस्थामा बुबाआमाले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने हुनजान्छ । सधैं केही न केही काममा व्यस्त रहिरहन्छन् । आफ्नो तीव्र इच्छाशक्ति र जिद्दिको कारण यिनीहरु कुनै पनि कार्य गर्न सक्छन् । यिनीहरुको सोच अत्यन्त विशाल रहन्छन, धेरै क्रियाशिल रहन्छन । संस्थाबाटै शिक्षा लिने गर्छन् र कुनै पनि कुरा प्राप्त गर्न सक्छन् ।
प्रेममा यिनीहरु रंगीन चस्माले हेर्छन र दुनियाँलाई जादुई नगरी देख्छन् । प्रेममा आफ्नो साथीको नजिक जानको लागि यिनीहरु हरेक कुरालाई वेवास्था गरिदिन्छन् । रातमा मधुर उज्यालोमा खाना खान, मधुर गीत संगीत सुन्न तथा प्रेमिकाको हातमा हात समाई ढिला रातसम्म जुनको उज्यालोमा घुम्न यिनीहरुलाई अति मन पर्छ र यतिमै यिनीहरुको प्रेम खत्तम हुँदैन झन बढ्छ । यिनीहरु जब वाचा गर्छन् तब हरसंभव पूरा गर्ने कोशिस गर्छन् । मेष राशिका व्यक्तिका लागि सिंह, धनु तथा स्वयम मेष राशिवाला आदर्श जीवनसाथी हुन्छन् । पारिवारिक अवस्थाको कुरा गर्दा यिनीहरुको जीवन कुनै फुलको गुच्छा भने होइन किनकी यिनीहरु सदैव आफ्नो निणर्य अरुमाथि थुपार्न खोज्छन्, जसको कारण मतभेद उत्पन्न हुन जान्छन । पारिवारिक सुखको लागि यिनीहरुलाई थोरै सहनशील त हुनैपर्छ साथै अरुको कुरालाई पनि महत्व दिनुपर्छ । मेषराशिका व्यक्तिहरु आफ्नो साथीको पूरा ध्यान राख्ने खालका हुन्छन् तर कहिले काहिं आफ्नो साथीबाट केही ज्यादा नै अपेक्षा राख्छन् जुन ठीक होइन । यस्तो मेष राशिको युवतीहरुमा भन्दा युवकहरुमा ज्यादा हुन्छ किनकी युवतीहरु आफ्नो साथीको इच्छा अनुसार आफूलाई सजिलै त्यसमा ढाल्छन् । यिनीहरुको घर सफासुग्घर, खुला तथा हावादार हुन्छ जहाँ हिंडडुल गर्ने प्रशस्त ठाउँ हुन्छ । जहाँ कलात्मक र आधुनिक दुबै रुचिलाई देख्न सकिन्छ ।
सधैं हतारमा रहन्छन् तथा आरामले खाना खाने समय पनि यिनीहरुसँग हुँदैन । खानपिनको बानीले नै व्यस्त दैनिकी बुझ्न सकिन्छ । खानामा तारेका तथा फ्राई र भुटेका कुराहरु अधिक प्रयोग गर्छन् । तर प्रोटिन र ताजा फलफुलको मात्रा कम रहन्छ । यहि कारणले पेट खराब रहन्छ र हृदयघातको संभावना पनि बढ्छ । यिनीहरुले समय दिएर ताजा खाना खानुपर्छ । क्याफिनको मात्रा संतुलित राख्नुपर्छ किनकी यसले तनाव बढ्छ । नियमित रुपमा सामान्य व्यायाम गर्नु पनि जरुरी छ । तर व्यायाम गर्दा कठिन व्यायाम नगर्नमा ध्यान दिनुपर्छ । बेलुकाको खान पछ केही बेर विस्तारै घुम्नु पनि फाइदाजनक हुन्छ । चोट चाँडै लाग्ने गर्छ यसैले बढी ध्यान दिनुपर्छ । धेरै अग्ला त हुँदैनन् तर वर्गाकार संरचनाले पनि देखाउँछ कि स्वस्थ छन् । धेरै जसोको मांसपेशी मजबुत तथा मुख मिलेको हुन्छ । हुनत आफ्नो राशि चिन्ह झैँ बलियो त हुन्छन् तर खानपिनमा र व्यायाममा विशेष ध्यान दिनुपर्छ नत्र शरिरको मध्य भागमा तौल बढ्नसक्छ । टाउको, आँखा तथा अनुहार यिनीहरुको कमलो भाग हुन् । प्रायः टाउको दुख्ने हुन्छ । टाउकोमा चोट र आगो लाग्नबाट बच्नमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ ।
मेष राशिका व्यवसायी प्राय: जसो हरेक काम राम्रो तरिकाले गर्छन् तथा सधैं अघि रहने कोशिश गर्छन् । कुनै एक काम मात्र नभई हरेक काममा लिडर हुन्छन तथा हरेक क्षेत्रमा घुम्न मन पराउँछन् र पूरा ध्यान दिन्छन् कि सबै काम सहि ढंगले होस् । इन्जिनियरिङ्ग, मेडिसिन, स्पेस, विज्ञान तथा धातु विज्ञान केही यस्ता क्षेत्र जहाँ यिनीहरु अतुलनीय रहन्छन् । यिनीहरु कुनै पनि कार्य गर्न सक्छन् जो यिनीहरुलाई राम्रो लाग्छ । यिनीहरुको दुःखी तथा असहाय मानिसहरु प्रति सहानुभूति राख्ने तथा स्वयमको दिमागबाट काम गर्ने क्षमताको कारण यिनलाई लिडर बनाउँछ । जबकी व्यवसायमा यिनीहरुलाई राम्रो हुन्छ तर पनि यो ध्यान राख्नुपर्छ कि हतारमा कुनै ठाउँमा लगानी गरि हाल्नु चाहिं राम्रो हुँदैन ।
वृष राशिका व्यक्तिहरुको बाहिरी व्यक्तित्व दर्शनीय हुन्छ । हेर्दा सुन्दर त हुन्छन् नै साथमा हृष्टपुष्ट पनि देखिन्छन् । वृष राशिको स्वामी शुक्र भएकोले यी राशि भएका व्यक्तिहरुको झुकाव कलात्मक क्षेत्र तिर बढी रहन्छ । यिनीहरुमा कलाको के न केही प्रतिभा त अवश्य नै हुन्छ साथै यिनीहरु कलाको कदर गर्ने पनि हुन्छन् । यिनीहरुको स्वाभिमान, स्वच्छन्दता र शीतलता पहिलो नजरमै हेर्दा पत्ता लाग्छ साथै यिनीहरुको आँखामा विश्वास झल्किन्छ । वृष राशिका व्यक्तिहरु जमिनसँग जोडिएका हुन्छन् र धेरै व्यवहारिक पनि हुन्छन् यसैले विनाकारण कुनै पनि प्रकारको जोखिम लिन मन पराउँदैनन् । यिनीहरु सुरक्षात्मक व्यवहार देखाउँछन् । जो कोही पनि यिनीहरुलाई सजिलै विश्वास गर्छन् । केही अपवादलाई छोडेर यिनीहरुको ईमान्दारिता माथि कसैले प्रश्नचिन्ह देखाउँदैनन । यिनीहरु कुनै काम गर्ने विचार गरेमा जति नै कडा मेहनत किन गर्न नपरोस् पछाडी फर्केर हेर्दैनन् र पूरा गरेरै दम लिन्छन् । यसले यिनीहरुको परिश्रमी र दृढ निश्चयी व्यक्तित्वको परिचय दिन्छ । आफ्नो मेहनत र योग्यताले यिनीहरु एक सुविधा सम्पन्न जीवन व्यतित गर्छन् र सामाजिक रुपमा प्रतिष्ठित हुने पूरा सम्भावना पनि यिनीहरु भित्र रहन्छ तर कुनै काम गर्ने या कुनै विचार अपनाउने जिद्दीले कयौं पटक सकारात्मक परिणामको बदला नकारात्मक परिणाम दिन पुग्छ । मानिसहरु यिनको यस्तो व्यवहारलाई ढिपीवाल सम्झन्छन् । यिनीहरु काफी धैर्यवान हुन्छन् र हरेक कार्यलाई विस्तारै विस्तारै किन नहोस् पूरा गरेरै छोड्छन् तर यिनीहरुको यो ढिलो गतिलाई अरुले आलस्य पनि ठान्न सक्छन् । यिनीहरुको राशि स्वामी शुक्र भएकोले यिनीहरु आफ्नो क्यारियरमा पनि काफी कलात्मक र रचनात्मक हुन्छन् हरेक कामलाई धेरै रुचि लिएर गर्छन् । यिनीहरुको राशि भूमि तत्व प्रधान भएकोले यिनीहरु विशेष गरि जमिनसँग जोडिएर रहन्छन् र कार्यस्थलमा यिनीहरुको व्यवहार धेरै सहयोगी हुन्छ साथै यिनीहरुको प्रदर्शन सहनीय मानिन्छ । धर्मको प्रति यिनीहरुको गहिरो आस्था रहन्छ । साथमा काफी सात्विक प्रवृति र राम्रो विचारयुक्त हुन्छन् । रोमान्टिक रुपमा यिनको व्यक्तित्व हेर्ने हो भने यस राशिका व्यक्तिहरु धेरै प्रेम गर्ने खालका हुन्छन् तर आफ्नो लागि पनि त्यस्तै समर्पण चाहन्छन् । यिनीहरु आफ्नो जीवनसाथी प्रति धेरै ईमान्दार हुन्छन् र आफ्नो साथीबाट पनि स्थायीत्वको आशा राख्ने गर्छन् । वृष राशि भएकाहरु हुन त खासै रिसाहा हुँदैनन् तर जब यिनीहरुको रिसको सीमा टुट्छ तब यिनीहरुको रिसबाट बच्नु मुश्किल हुन्छ । त्यस्तै कुनै कुरामा एक पटक अडिए भने त्यसबाट यिनीहरुको विचार बदल्न अत्यन्त मुश्किल हुन्छ । सबै रुपमा हेर्दा वृष राशिका व्यक्तिहरु धेरै व्यवहारिक हुने गर्छन् ।
यस राशिका नवयुवक सुदृढ शारीरिक बनावटको मालिक हुन्छन् । हुनत यिनीहरु आफ्नो कामलाई आफ्नै अनुसार गर्न चाहन्छन् र यो पनि ध्यानमा राख्नुपर्छ कि यिनीहरुले रोजेकै बाटो सहि हुनेगर्छ । हरेक काममा यिनीहरु आफ्नो विचार राख्छन् तर यिनीहरुमा सन्तोष पनि धेरै हुन्छ तथा अरु माथि आश्रित रहन पनि मन पराउँछन् । यिनीहरु आफ्नो दृढ इच्छा शक्तिले अघि बढ्छन् जुन यिनीहरुको स्कुलको काममा पनि देखिन्छ । स्कुलमा यिनीहरुको प्रस्तुति अत्यन्त राम्रो रहन्छन् जुन एक राम्रो क्यारियरको शुरुवात हुन जान्छ । कहिले काहिं यिनीहरु आफैमा डुबेर रहन्छन् तथा आफ्नो पैशा राम्रो जीवन जीउनमा खर्च गर्न चाहन्छन् । वृष राशि भएकाहरुलाई एक राम्रो नेटवर्कको बारेमा गहिरो ज्ञान हुन्छ त्यसैले यिनीहरु सहि मानिसहरुसँग मिलेर रहन्छन् । यिनीहरुलाई त्यो हरेक काम मनपर्छ जसले धर्तीको नजिक लान्छ । जस्तै बगैंचा लगाउनु । यस राशिका युवा सफासुग्घर तथा हरेक कामलाई तरिका पुर्याएर गर्ने खालका हुन्छन् । एक आदर्श छोरो हुन्छन् । वृष राशिका युवतीहरु ज्यादा फेशन गर्ने र राम्रो राम्रो कपडा लगाउन मन पराउने खालका हुन्छन् । यिनीहरुको स्वामी ग्रह शुक्र हो जुन प्रेम र सुन्दरताको ग्रह हो । जसको राशि चिन्ह घाँटी या गलामा निवास गर्ने भएकोले यिनीहरुको झुकाव नेकलेस तिर ज्यादा रहन्छ । यिनीहरुलाई ज्यादा समय पसलहरुमा पैशा खर्च गरिरहेको देखिन्छ । कहिले काहिं यिनीहरु अति आत्मकेन्द्रित हुन्छन् र यस समयमा यिनीहरुलाई आरामले यो कुरा सम्झाउन सकिन्छ कि सदैव पैशा खर्च गर्दैमा ती सबै कुरा मिल्दैन जसको चाह आफूलाई हुनेगर्छ । मीठा कुरा यिनीहरुको कमजोरी हुनेगर्छ । जसको कारण अपचको कारक बन्नसक्छ । यिनीहरुमा सन्तोष धेरै रहन्छ तथा आफ्नो उद्देश्य प्राप्त गर्नको लागि हरेक कदम सोच विचार गरेर मात्र उठाउँछन् । मेहनत र अरुको हर संभव मद्धत गर्नु यिनीहरुको जीवनको मूख्य उद्धेश्य हुन्छ । खेलकुद तिर धेरै झुकाव हुँदैन तर कहिले काहिं गल्फ जस्ता खेलमा हल्का सहभागिता जनाउनुमा नाईंनास्ति रहँदैन । कहिले काहिं यी युवतीहरु एकै कुरामा टाँसिएर रहन्छन र थोरै समस्या हुन पनि सक्छ तर जहाँ आफ्नो उद्देश्य प्राप्त गर्ने कुरा आउँछ तब यिनीहरु पूरा रुपमा केन्द्रित भएर काम गर्छन् । अरुबाट उत्पन्न हुने कुनै पनि बाधा अवरोधले यिनीहरुको मार्गलाई रोक्न सक्दैन । अभिभावकहरुले यो कुरा विशेष ध्यानमा राख्नुपर्छ कि यिनीहरुलाई ठाउँ ठाउँमा घुम्न ज्याद मनपर्छ ।
वृष राशिका व्यक्तिहरु आफ्नो परिवारको साथमा रहन मन पराउँछन् । यिनीहरुको पूरा ध्यान आफ्ना बच्चाहरु माथि हुन्छ र बच्चाहरु पनि पूरा यिनीहरु माथि आश्रित रहन्छन् । यिनीहरुको दिल धेरै ठूलो हुन्छ र यिनीहरुको लागि परिवार नै सर्वोपरि रहन्छन् । उनीहरुको सुखको लागि हर तरहको बलिदान गर्न तयार रहन्छन् । जबसम्म कसैले यिनीहरुलाई दबाउने कोशिस गर्दैन तबसम्म यिनीहरु मेलजोलका साथ रहन मन पराउँछन् । यिनीहरु आफ्नो सम्बन्धमा मीठास र मधुरता तथा स्थिरता बनाई राख्नुमा विश्वास राख्छन् । यिनीहरु रोमान्टिक, प्रेम गर्ने तथा सबैलाई आकर्षित गर्ने खालको हुन्छन् । यदि आफ्नो साथीको ध्यान आफूमाथि नभएमा यिनीहरुलाई जलन हुनथाल्छ । चाहे जति नै समय किन नहोस्, यिनीहरुको आफ्नो साथीप्रतिको प्रेम सदा एकै रहन्छ । वृष राशि भएकाहरुको वृष, कन्या तथा मकर राशि भएकाहरुसँग राम्रो मित्रता रहन्छ । कुम्भ राशि भएकाहरुसँग पनि वैवाहिक सम्बन्ध सफल हुनसक्छ । यिनीहरु यस कुराको विशेष ध्यान राख्छन् कि आफ्नो घरमा के छ र के छैन तथा सधैं यो चाहन्छन् कि आफ्नो घरमा केही कुराको कमि नहोस् ।
वृष राशिको चिन्हको असर घाँटी, गर्धन, जिब्रो, कान तथा थायराइड ग्लान्डरमा स्पष्ट देखिन्छ । यसैले शरीरमा यी क्षेत्रको विशेष ध्यान राख्नुपर्छ । माँसपेशीहरु राम्रो हुन्छ, राम्रो धावक हुनसक्छन् तर तौल छिट्टै बढ्ने हुँदा स्वास्थ्यको खास ध्यान राख्नुपर्छ । शाकाहरी व्यक्तिहरुले प्रोटिनयुक्त खाना खानुपर्छ । किनकी यस राशि भएकाहरुलाई उमेर बढेपछि हृदयघातको संभावना रहन्छ तर नियमित रुपमा हल्का व्यायम गरे यसलाई कम गर्न सकिन्छ । सातामा ३ पटक एरोबिक्स, साइक्लिङ्ग या छिटो छिटो हिंड्नु फाइदा हुन्छ । यिनीहरुलाई तनाव सम्बन्धी समस्या कमै रहन्छ किनकी बाहिरको कामलाई घरमा लानु ठीक मान्दैनन् । रिस चाँडै उठ्दैन तर उठेपछि शान्त हुन पनि समय लाग्छ जुन मुटु र रक्तचापको लागि ठीक होइन । कुनैबेला रिस उठे लामो सास फेर्ने, एक देखि दशसम्म गिन्ती गर्ने या त्यो स्थानबाट अन्तै कतै जाने । हुनत केही यिनीहरु मोटा हुन्छन् तर आकर्षक हुन्छन् । सफा रंग तथा सुन्दर आँखा भएका हुन्छन् । घाँटी खराबीको समस्या रहनसक्छ । यसलाई वेवास्था गरे थाइराइडको समस्या हुनसक्छ । कब्जियतको समस्या पनि रहनसक्छ । खानामा तिल, दाल तथा माछा प्रयोग गर्नु राम्रो हुन्छ जसबाट प्रोटिन मिलोस् । मासु तथा चिजयुक्त खानाबाट टाढै रहनु राम्रो हुन्छ ।
वृष राशि भएकाहरु सफल व्यवसायी हुन्छन् । यिनीहरु सिर्फ पैशा कमाउन मात्र नभई कमाएको पैशा सुरक्षित राख्न पनि राम्रोसँग जान्दछन् । यिनीहरु आफ्नो व्यवसायको विकास धेरै राम्रोसँग गर्छन् तथा आफ्नो कुनै पनि गलत निणर्यको असर त्यसमाथि पर्न दिंदैनन् । यिनीहरु एक राम्रो फाइनान्सर, बैंकर हुन सक्छन् यदि यिनीहरुको कला तिर झुकाव भएमा संगीत क्षेत्रमा जान मन पराउँछन् र यस क्षेत्रमा पनि अघि रहन्छन् । जमिन तथा पर्यावरणसँग सम्बन्धित काममा पनि राम्रो प्रदर्शन गर्न सक्छन् ।
मिथुन राशिका भएकाहरु काफी फुर्तीला हुन्छन् । यस राशिको स्वामी ग्रह बुध भएकोले आमरुपमा यिनीहरु तमाम भौतिक सुख प्राप्त गर्नमा सक्षम रहन्छन् । यिनीहरुको राशि चिन्ह जुम्ल्याहा छ जसले यिनीहरुको द्धिस्वभावको प्रदर्शन गर्दछ । यिनीहरुको व्यवहार धेरै मित्रवत् रहन्छ । विपरित लिङ्गी प्रति सहज आकर्षित हुनु पनि यिनीहरुको व्यक्तित्वको पहिचान हो । यिनीहरुको व्यक्तित्वमा भएको द्धिस्वभावले यिनीहरुलाई बहुमुखी पनि बनाउँछ साथै एकै समयमा व्यवहारिक हुनुका साथै कल्पनात्मक र रचनात्मक पनि हुन्छन् । बुद्धि लगाउने कार्यमा यिनीहरुको खास रुचि रहन्छ । मिथुन राशि भएकाहरु जिज्ञासु त हुन्छन् नै साथमा आफ्नो बुद्धि बलले चतुर पनि बन्छन् । वाकपटुतामा निपुणताका साथै हाजिरी जवाफमा पनि कमाल हुन्छन् र स्वभावत बिनोदी पनि हुन्छन् । यी सारा गुणहरुको साथमा असंगतता, सन्कीपन पनि झल्किन्छ । वास्तवमा यिनीहरुको दोहोरो व्यवहारको कारण यिनीहरु कयौं पटक सकारात्मक त कति पटक नकारात्मक देखिन्छन् । एकातिर यिनीहरु शान्त र गम्भिर देखिन्छन् भने अर्कोतिर विनोदी स्भावका साथै अरुको मजाक उडाउन पनि बेर लगाउँदैनन् । संगतको असर यिनमा छिट्टै पर्छ । खराब संगतले खराब त असल संगते असर प्रभाव छिट्टै पर्छ । यिनीहरुको व्यक्तित्वको एक गुण मुडी पनि हो । क्यारियरको रुपमा हेर्ने हो भने आफ्नो कार्यक्षेत्रमा यिनीहरुको तार्किक क्षमता लाजवाफ हुन्छ जसले यिनीहरुलाई अघि बढ्न मद्धत पुग्छ । जो व्यक्ति लेखन तथा अध्यापन या संगीत क्षेत्र सम्बन्धीत हुन्छन् त्यसमा पनि धरै राम्रो प्रदर्शन गर्छन् । आफ्नो अतिरिक्त सांस्कृतिक गतिविधिले कार्यस्थलमा एक विशिष्ठ परिचय बनाउँछन् । यिनमा नेतृत्वको गुण पनि रहन्छ । त्यसैले एक टिम लिडरको रुपमा पनि राम्रो भूमिका निभाउँछन् । मिथुन राशिको रोमान्टिक व्यक्तित्वलाई हेर्ने हो भने यिनीहरु विपरित लिङ्गी प्रति छिट्टै नै आकर्षित हुन्छन् र अरुलाई पनि छिट्टै आफूतिर आकर्षित गर्छन् । यिनीहरुको साथ प्रेम सम्बन्ध बढाउनु पनि दिलचस्प हुन्छ, रमाइलो हुन्छ र यसको लागि साहस पनि धेरै चाहिन्छ किनकी द्धिस्वभाव र लापर्वाहीको कारण आफ्नो दिल टुक्राटुक्रा गर्नमा कारगार हुनपुग्छ । साथै यिनीहरुको व्यक्तित्वमा सनक पनि ज्यादा भएकोले यसको पनि पूरा संभावना रहन्छ कि यिनीहरुले आफ्नो साथीलाई दिवानगीको हदसम्म चाहन सक्छन् ।
यिनीहरु धेरै सुन्दर तथा सबैको मनपर्ने नवयुवक हुन्छन् । जो हरेकलाई आफ्नो हाजिरी जवाब र हँसीमजाकको आदतले आकर्षित गर्छन् । हुनत यिनीहरु जन्मै देखि लिडर त हुँदैनन् तर सामुहिक कार्यमा खुशीसाथ भाग लिन्छन् । यिनीहरुको कल्पनामा धेरै कुराहरु एक साथ चल्छन, चाहे त्यो चेसको गेम होस् या कम्प्युटरको तर एक कुरा यिनीहरुको हकमा हुँदैन कि त्यो हो यिनीहरुमा संयम हुँदैन तथा यिनीहरु कुनै पनि काममा दक्षता हासिल नगरुन्जेलसम्म त्यसमा टाँसिएर रहन सक्दैनन् । कहिले काहिं त यो सिधै थाहा हुन्छ कि जुन कुरा गरि रहेका छन् त्यसको बारेमा केही जानकारी छैन र जे बोलेका छन् त्यो यिनीहरुको बाहिरी ज्ञान मात्र हो । यिनीहरु जन्मै देखि शिकारी हुन्छन् र अरुलाई सजिलै आफूतिर आकर्षित गर्छन् । यिनीहरु राजनीति तथा जनताको सेवाको काममा सधैं सफल रहन्छन् । भविष्यमा कुनै पनि क्यारियर अपनाउनको लागि निणर्य लिनमा यिनीहरु सयौं पटक आफ्नो विचार बदल्छन् । मिथुन राशिकी युवतीहरु हरेक काम छिट्टै पूरा गर्ने क्षमता राख्छन् । आफ्नो राशिको चिन्ह अनुसार यिनको दिमागमा पनि दुई विचार एक साथ चलिरहन्छन् । यिनीहरुको दिल शान्ति चाहन्छ तर दिमागमा कुनै न कुनै विचार चलिरहन्छ । चतुर तथा सुन्दर हुनाको कारण यिनीहरुको धेरै मित्रहरु हुन्छन् । साथै यिनीहरुको फोन बज्न बन्द हुँदैन । संप्रेषण कलामा यिनीहरुलाई महारथ प्राप्त हुन्छ तथा जुन पत्र यिनीहरु लेख्छन् त्यसमा यिनीहरुको कुशलताको नमुना देखिन्छ । यिनीहरु व्यस्त रहनुमा यिनीहरुको साथ धेरै शोखहरु हुन्छन् । यसैले यिनीहरु एरोबिक्स देखि दर्शनशास्त्रसम्म हरेक कुरामा व्यस्त रहन्छन् । जबकी यिनीहरु धरै बतौरु हुन्छन् तर पढाईमा पनि उत्तिकै ध्यान रहन्छ र यसको लागि पनि यिनीहरुलाई ज्यादा मेहनत गर्नुपर्दैन । आफ्नो अतिरिक्त उर्जा खत्तम गर्नको लागि यिनीहरु एथलेटिक्समा पनि भाग लिन सक्छन् ।
मिथुन राशि भएका व्यक्तिहरुलाई यो सल्लाह दिइन्छ कि विवाह गर्ने हतार नगर्नु । यस बारेमा निर्णय लिनुअघि ठीकसँग सोच विचार गर्नु । तुला, कुम्भ, मिथुन तथा मेष राशि भएकाहरुसँग यिनीहरुको सम्बन्ध राम्रो साबित हुन सक्छ । जोसँग विवाह गर्न चाहन्छन् पहिला यो पक्का गर्नुपर्छ की उक्त व्यक्तिसँग आफूलाई कुनै समस्या त छैन । किनकी रोमान्समा जो व्यक्ति यिनीहरुसँग जोडिन्छ उसले यिनीहरुलाई एक राम्रो प्रेमीको रुपमा पाउँछ तर कुनै कुरा मिल्नु अघि नै यिनीहरुको लापर्वाहीले उनीहरुको दिल तोडिन्छ । यिनीहरुको व्यवहार केही शैतानी पाराको हुनसक्छ । यसैले यिनीहरुले विवाह गरेर त्यहि व्यक्तिलाई घरमा ल्याउनुपर्छ जो जीवनको हरेक उतार चढावमा यिनीहरुको साथ रहोस् । यो कुराको पनि पक्का गर्नुपर्छ कि यिनीहरुले गर्ने हँसी मजाक आउने साथीले बुझोस् । यिनीहरुको साथ खुशी नै खुशी हुनेछ यदि यिनीहरुको पारिवारिक जीवन खुशीले भरिएको छ भने र यस्तो भएमा यिनीहरु भट्किदैनन् ।
मिथुन राशि भएकाहरुको शरीर तथा हड्डी बलियो हुन्छ । अनुहारमा खुशीको भाव रहरिहन्छ तथा अनुहारबाट यिनीहरुको समस्याको अन्दाज लगाउन सकिन्छ । हँसी मजाकको भरमा केही लुकाउन खोजे तापनि अनुहारले धोका दिन्छ । यिनीहरु कमै मोटा हुन्छन् । फोक्सो, काँध, हात तथा औंलाहरुमा कुनै दुर्घटना हुनसक्छ । धेरैलाई अस्थमाको समस्या रहनसक्छ । शारीरिक दुखाई छिट्टै हुनेगर्छ । यसैले यस्तो अवस्थाबाट बच्न सावधान रहनुपर्छ । व्यस्त जीवनहैली नै समस्याको कारक बन्नसक्छ । एक समयमा एक भन्दा धेरै काममा अल्झिन्छन् । यदि आप्mनो रप्mतार कम गरेर आपूmलाई ध्यान नदिए ठूलै समस्यामा फस्न सकिनेछ । आरामको लागि समय निकाल्नुपर्छ । सधैं काममा घेरिदा तनाव बढ्नसक्छ । तनाव कम गर्ने उपाय अपनाउनुपर्छ । सुत्नु अघि हर्बल चिया पिउनु उत्तम हुनसक्छ ।
भाषाविद्, अध्यापन तथा लेखकको रुपमा मिथुन राशि भएकाहरु बढी सफल हुन्छन् या यो पनि भन्न सकिन्छ कि यस्तो कुनै क्षेत्र जसमा फरक फरक मानिसहरुसँग भेट्ने मौका मिल्छ त्यसप्रति यिनीहरुको झुकाव ज्याद रहन्छ । मिडिया सम्बन्धी धेरै मानिसहरु मिथुन राशि भएका हुन्छन् । यात्रा तथा मार्केटिङ्ग पनि यिनीहरुको रुचि र राम्रो काम प्रदर्शन गर्ने क्षेत्र पर्न आउँछ । यिनीहरुको लागि तिनीहरुको साथमा काम गर्न सहज हुन्छ जसले यिनीहरुको क्षमता बुझ्छन् र यिनीहरु माथि भरोसा गर्छन् । यिनीहरुले पैशाको लोभमा पर्नु र कुनै सट्टाबाजी गर्नु हानिकारक हुन्छ ।
कर्कट राशिमा जन्मिएका व्यक्तिहरु प्राय सामान्य कदका हुन्छन् । यस राशिका व्यक्तिहरुलाई चन्द्रमा प्रभावित गर्छ । जुन जल तत्वद्धारा संचालित हुन्छ । यस राशिको चिन्ह कर्कट मतलब गंगटो । यसैले चंचलता, भावुकता र संवेदनशीलता यिनीहरुमा कुदी कुदी भरिएको हुन्छ । यिनीहरुको विशेषता हो कि यिनीहरु आफू आसपास परिवार जस्तो माहौल बनाउँछन् अर्थात मिलनसार स्वभावका हुन्छन् । यिनीहरुलाई आफ्नो माटो प्रति ठूलो प्रेम रहन्छ । कर्कट राशिका व्यक्ति धेरै कलात्मक र रचनात्मक हुन्छन् । केही परम्परा प्रति धेरै लगाव राख्छन् । स्वभाविक रुपमा ज्ञानार्जन गर्छन् । संवेदनशील र भावुकका साथ केही मुडी पनि हुन्छन् र कति अवसरहरुमा लजालु पनि । विशेष अवससरमा बच्चा जस्तो निर्दोष पनि हुन्छन् । यिनीहरुको काम धेरै सराहनीय रहन्छन र यदि वरपरको परिस्थिति अनुकुल भएमा धेरै उदार पनि रहन्न् । स्वभाविक रुपमा यिनीहरु सुझी बुझी हुन्छन् तर असुरक्षाको भावना पनि बढी रहन्छ । यहि भावनाले गर्दा कुनै बेला यिनीहरु असंवेदनशील, कठोर, अशिष्ट व्यवहार गर्न पुग्छन् र यिनीहरुको चंचलता हँसी मजाकमा बदलिन्छ । यिनीहरुलाई छिट्टै रिस उठ्छ र रिसाई हाल्छन् तर त्यो व्यवहार क्षणिक मात्र रहन्छ र फेरि घुलमिल भई हाल्छन् । कार्यस्थलमा यिनीहरुको प्रदर्शन धेरै रचनात्मक रहन्छ । यिनीहरु हरेक कार्यलाई फरक अन्दाजमा गर्छन् । सफा सुग्घर छविमा रहन्छन् र यिनीहरुको विचार धेरै गहिरो र गुढ रहन्छ । आफ्नो कलात्मक र मिलनसार व्यक्तित्वको कारण कार्यस्थलमा आफ्ना सहकर्मिहरुसँग धेरै घुलमिल हुन्छन् । एकातिर आफ्नो काम गर्ने तरिकाले प्रशंसित रहन्छन् भने अर्कोतिर जमघटहरुमा पैशा खर्च गर्न गाह्रो मान्ने बानीले कन्जुस बनाई दिन्छ र साथीभाइहरुमा हँसाईको पात्र बन्न पुग्छन् । रोमान्टिक रुपमा हेर्दा कर्कट राशि भएकाहरु आफूभन्दा भिन्न प्रकृतिका व्यक्तिहरुसँग रोमान्स गर्न मन पराउँछन् । यिनीहरु देख्नमा आकर्षक, संवेदनशील, क्यारियरमा रचनात्मक हुनछन् जुन प्रेमको लागि काफि हुन्छन् तर यो पनि ध्यान दिनुपर्छ कि चन्द्रमा र जलतत्वको प्रभावले गर्दा यिनीहरुको घोचिलो मजाक र चंचलता भने अगाडिको व्यक्तिले सहन सक्छ या सक्दैन ।
कर्कट राशिका नवयुवाहरुको मुड सधैं बद्लिरहन्छ । जब कसैलाई आशा पनि हुँदैन तब पनि यिनीहरु काम गर्छन् । यिनीहरु परिवारको महत्व बुझ्छन् र परिवारसँग जोडिई रहन चाहन्छन् । घरको काम गर्नको लागि यिनीहरुको मद्धत लिन सकिन्छ । यिनलाई खेलकुदमा भाग लिन धेरै मनपर्छ । यिनीहरु टिमको नायक रहन्छन् । सरसामान जम्मा गर्नु यिनीहरुको मनपर्ने कुरा हो । कुनै पनि कुरालाई फ्याँदैनन् । यिनको कपडा लगाउने तरिका त्यति राम्रो हुँदैन । यिनीहरु केही कन्जुस हुन्छन् र आफू मा पैशा खर्च गर्न मन पराउँदैनन् । कर्कट पेटसँग सम्बन्धित भएकोले यिनीहरुलाई भोक ज्यादा लाग्छ । यिनीहरुको फ्रिज सँधै भरिई रहेको हुन्छ । यिनीहरुको मित्रहरु यिनीहरुबाट सल्लाह लिन सँधै तत्पर रहन्छन् र यिनीहरु पनि सबैको मद्धत गर्न तयार रहन्छन् । यस राशिका युवतीहरु अरु युवती भन्दा धेरै भावुक रहन्छन् । यिनीहरुलाई घरेलु वातावरण मनपर्छ । यिनीहरु माथि विश्वास गर्न सकिन्छ । यिनीहरु कामलाई सिर्फ काम मात्र नभई कर्तव्य सम्झिन्छन् र यसैमा खुशी रहन्छन् । यस राशिका युवतीहरु आफ्नो वरपर एक खोल बनाउँछन् जसलाई तोड्न मुश्किल हुन्छ । प्रायः आफ्नो जीवन खुशी र सुखमै बिताउन मन पराउँछन् । यिनीहरु सबै परीक्षामा राम्रो अंकले पास हुन्छन् । कलेज यिनीहरुको जीवनको अन्त्य होइन राम्रो क्यारियरको सुरुवात हुन्छ ।
आफू भन्दा विपरित व्यवहार भएकाहरु सँग यिनीहरुको प्रेम हुन्छ । सफल आत्मविश्वासी तथा मजबुत व्यक्तिप्रति आकर्षित त हुन्छन् तर आफ्नो भित्री व्यवहारका कारण प्रेम व्यक्त गर्नमा चाहिं असफल रहन्छन् । यसैकारण धेरै जसो यिनीहरुको प्रेम एकतर्फी रहन्छ । यिनीहरु हतारमा विवाहको निर्णय लिंदैनन् किनकी आफ्नो जीवनसाथीको छनौट खुला दिमागले सोच विचार गरेर मात्र गर्छन् । कर्कट, वृश्चिक तथा मीन राशि भएकाहरु यिनीहरुको राम्रो मित्र, जीवनसाथी बन्न पुग्छन् । आफ्नो जीवनसाथी प्रति ईमान्दार र घरमा स्थिरताका कारण यिनीहरुको वैवाहिक जीवन धेरै राम्रोसँग बित्छ । यिनीहरुलाई घरको काम गर्न र बच्चाहरुको हेरविचार गर्न धेरै मनपर्छ । यिनीहरु आफ्नो आउने समयको लागि वचत गर्न मन पराउँछन् । पुरुष हुन् या महिला कर्कट राशि भएकाहरु आफ्नो घरलाई प्रेम गर्छन् र घरमा आफूलाई सुरक्षित महसुस गर्छन् । जसरी धनु राशिको लागि हरेक कुराहरु एक निश्चि स्थानमा रहनुपर्छ तर कर्कट राशि भएकाहरुलाई कुनै फरक पर्दैन कि कुन चिज कहाँ छ ? यसले गर्दा केहीले हेर्दा यिनीहरु फोहरी र घरलाई दुर्गन्धीत बनाउँछन् । तर यसले यिनीहरुलाई कुनै फरक पर्दैन ।
यिनीहरुलाई कडा शारीरिक परिश्रम मन पर्दैन । घरमै सुतेर समय बिताउन मन पराउँछन् । घरमै बसेर कुनै राम्रो किताब पढ्नु, चकलेट र मिठाई खाइ रहन मनपर्छ । मिठाईको साथै ताजा फलफुल र सब्जि खान मन पराउँछन् । ज्यादा प्रोटिन भएको कम बसाएको खान मन पराउँछन् । व्यायम यिनीहरुलाई आवश्यक छ । यिनीहरुलाई घर प्रिय हुन्छ त्यसैले घरपरिवारलाई पनि व्यायममा सहभागी गराउनु राम्रो हुन्छ । पेट र मुटुको समस्या हुनसक्छ । खाली समयमा रक्सी पिउनुबाट बच्नुपर्छ अन्यथा कुनै ठूलो समस्या निम्त्याउन सक्छ ।
कर्कट राशि भएकाहरु धेरै बुद्धिमान र हातको काममा माहिर हुन्छन् । यिनीहरु राम्रो चित्रकार हुन सक्छन् । बिक्रीको बजारमा पनि सफल रहन्छन् तथा विज्ञापनको क्षेत्रमा पनि धेरै राम्रो प्रदर्शन गर्न सक्छन् । केही लेखनलाई प्रमुख व्यवसाय बनाउन सक्छन् र खानेकुराको विषयमा लेख्न सक्छन् जसले गर्दा दुनिया यिनीहरुको आफ्नो घर जस्तै बन्न पुग्छ । यिनीहरुमा धेरै जसोको क्यारियर धेरै राम्रो रहन्छ । जबकी यस्तो हुन सक्छ कि यिनीहरुले बिचैमा कार्यक्षेत्र बदल्न सक्छन् । यस्तो करिब ३५ वर्षसम्म हुनसक्छ । पैशा तथा भौतिक सुखसुविधा यिनीहरुको लागि ठूलो महत्व रहन्छ र यिनीहरु ठूला ठूला निर्णय पैशालाई ध्यानमा राखेर गर्छन् । पैशाको मामलामा यिनीहरु कन्जुस भेटिन्छन् । यिनीहरुको जीवनमा पैशा आँधी जसरी आउँछ । सट्टा पट्टा तथा जुवामा यिनीहरुलाई फाइदा हुँदैन ।
राशिको नाम जस्तै यस राशि भएकाहरु सिंह जस्तै साहसी, निडर, मजबुत, आत्मविश्वासले भरिएका हुन्छन् । यिनीहरु जहाँ पनि रहन्छन् त्यहाँ एक विशिष्ट छाप छोड्छन् । यिनीहरु एकदम फ्याट्ट बोल्ने हुन्छन् जो बिना हिच्किचाहट सामुन्नेको व्यक्तिलाई जे पनि भनि दिन्छन् । यिनीहरुको व्यक्तित्वमा एक प्रकारको असिम उत्साह झल्किन्छ, सदैव एक मज्जाको उर्जा यिनीहरुमा हुन्छ । यिनीहरु अत्यन्त स्वाभिमानी हुन्छन् र गौरबमयी तेज अनुहारमा झल्किन्छ । यस राशिको स्वामी सुर्य भएकोले यिनीहरु तेजस्वी र पराक्रमी हुन्छन् । यिनीहरुको फ्याट्ट बोल्ने बानीले गर्दा कयौ पटक यिनका नजिकका आफन्त पनि अपमानित महसुस गर्छन् तर उनीहरुलाई मनाउने सामथ्र्य पनि यिनीहरुमा हुन्छ । रचनात्मकता, आदर्शवाद तथा नेतृत्वको क्षमता यिनीहरुमा स्वभाविक रुपमा विकसित हुन्छ । यिनीहरु आफ्नो असफलताबाट पनि सिक्छन् र एक नयाँ उर्जा र उत्साहका साथ पुनः आफ्नो लक्ष्यको लागि प्रयासरत रहन्छन् । सामाजिक दृष्टिले यिनीहरुको व्यक्तित्व धेरै संगठित हुन्छ जसले गर्दा यिनीहरुको सामाजिक सम्मान र प्रतिष्ठा रहन्छ । कार्यस्थलमा यिनीहरुको प्रदर्शन अत्यन्त राम्रो रहन्छ । यिनीहरु आफ्नो एक समुह बनाउँछन् र त्यसको नेताको भूमिका निभाउँछन् । नेतृत्वको क्षमता यिनीहरुमा स्वाभाविक रुपमा रहेको हुन्छ । यिनको दबंगी पाराले कार्यस्थलमा प्रतिद्धन्दी पनि उत्पन्न गर्छन् । यिनीहरु कुनै पनि चिजलाई राम्रोसँग म्यानेज गर्न जान्दछन् जसले गर्दा कार्यस्थलमा धेरै समस्याको सामना गर्नुपर्दैन । कसैको अधिनमा रहेर काम गर्न मन पराउँदैनन् । आफ्नो पारामा काम गर्ने छुट मिलेमा यिनीहरु राम्रो प्रदर्शन गर्न सक्छन् । यहि राम्रो प्रदर्शनले उच्च पदमा पुग्छन् । रोमान्टिक जीवनमा हेर्ने हो भने यिनमा सौन्दर्य बोधको चेतना गज्जबको हुनछ । सुविधा सम्पन्नयुक्त विचारवाला, प्रसिद्ध र देख्नमा सुन्दर व्यक्ति यिनीहरुलाई मनपर्छ । यिनीहरु धेरै राम्रो प्रेमी हुन्छन् र आफ्नो प्रेमलाई पाउनको लागि जोसँग पनि टक्कर लिने हिम्मत राख्छन् । यिनीहरुको प्रेम गर्ने तरिका पनि अद्धभूत रहन्छ । तर कयौं पटक यिनीहरुको प्रेम गर्ने तरिका धेरै हदसम्म अरुलाई तल्लो स्तरको सोच्ने बनाउँन सक्छ जसले गर्दा यिनीहरुको पार्टनरले असहज महसुस गर्न सक्छन् । बाहिरबाट हेर्दा कठोर र मजबुत देखिने सिंह राशि भएकाहरु भित्रबाट धेरै विनम्र र उदार हुन्छन् ।
सिंह राशिका नवयुवालाई पछि छोड्नु कसैको लागि पनि संभव हुँदैन । यिनीहरु ठूलो खेलाडी हून्छन् । यिनीहरु जन्म देखिनै लिडर हुन्छन् र आफ्नो समुहमा सदैव अगाडि रहन्छन् । आफ्नो नियम स्वयम बनाउँछन् र सो अनुसार तबसम्म चल्छन् जबसम्म स्वयम बोर हुँदैनन् र त्यसपछि नयाँ खेल चुन्छन् । विद्यालयमा पनि हरेक कुरामा यिनीहरु अघि रहन्छन् । यिनीहरु ठूलो भएपछि राम्रो राजनेता या कलाकार हुन सक्छन् । सधैं मानिसहरुको आँखा अगाडि रहने बानीका कारण सदैव आकर्षणको केन्द्र बन्न पुग्छन् र यो कुरा यिनीहरुलाई मन पर्छ । सिंह राशिका युवतीहरु सँधै सुन्दर देखिन चाहन्छन् र यिनीहरुमा ठीक सँग तयार हुने र सुन्दर कपडा लगाउने राम्रो समझ हुन्छ । सोही अनुसार कपडा लगाउँछन् । यिनको खुलापन सदैव देखावटी गर्नमा प्रेरित गर्छ । आफ्नो रचनात्मकताको कारण यिनीहरु राम्रो फिल्मी कलाकार बन्न सक्छन् । यिनीहरुलाई अभिनयको साथै टेनिस, घोडचढी तथा किनबेचको शौख हुन्छ । यिनीहरु धेरै सामाजिक हुन्छन् तथा समुहमा रहन मन पराउँछन् । यिनीहरु जन्म देखि नै लिडर रहन्छन् । यिनीहरुको सपना धेरै ठूलो र लक्ष्य उच्च हुन्छ । यिनीहरुको साथमा समयको कमि रहन्छ तर पनि ठाउँ ठाउँ घुम्न मन पराउँछन् ।
सिंह राशि भएकाहरुको व्यक्तित्व अत्यन्त आकर्षक हुन्छ जसको कारण भिडमा पनि अलग देखिन्छन् । यिनीहरु ज्यादा जस्तो आफ्नो कुरा धेरै खुला शब्दमा तथा जोडले भन्ने बानीलाई अरुले गलत सम्झिन सक्छन् । यदि यिनीहरुको अहं यिनको अघि नआउने हो भने यिनीहरु एक राम्रो व्यक्ति साबित हुन सक्छन् । यिनीहरु यस्तो प्रेमी हुन्छन् जसको आफ्नै खास स्टाइल हुन्छ तथा आफ्नो साथीबाट पनि त्यस्तै अपेक्षा राख्छन् । जब यिनीहरु आफ्नो साथीको साथमा हुन्छन् तब दिल खोलेर खर्च गर्छन् र महँगो उपहार दिन्छन् । सिंह, मेष तथा धनु राशि भएकाहरु यिनीहरुको आदर्श साथी प्रमाणित हुन्छन् । तर यो पनि सहि हो कि यिनीहरुको वैवाहिक जिन्दगी त्यति खुशीपूर्ण देखिदैन जति विवाह अघि प्रेममय समय रहन्छ । यदि त्यसलाई पनि खुशीयालीपूर्ण बनाउन चाहने हो भने यिनीहरुले कोशिस गर्नु पर्छ कि आफ्नो आदेशात्मक व्यवहारमा नियन्त्रण रहोस् र आफ्नो साथीलाई पनि पूरा अधिकार दिनुपर्छ । यिनीहरुको घर धेरै सुन्दर र विलासितापूर्ण हुन्छ ।
हरेक काममा लिडर भएकोले धेरै जिम्मेवारी रहन्छ तर खानपिनमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । धेरै जसो बसेर खाने समय नहुन सक्छ तर त्यसको लागि ताजा फलफुल खानुपर्छ । पूरा एकाग्रताको साथ क्यारियरको लागि अघि बढ्ने हुँदा स्वास्थ्यमा ध्यान दिन सक्दैनन् । हर समय काम गरि रहनु भन्दा केही समय निकालेर विश्राम गर्नु आवश्यक रहन्छ । सिंह राशिकालाई हृदयघातको संभावना रहन्छ । यसैले खानामा नुनको मात्रा कम गर्नुपर्छ । व्यायाम गर्न त मनपर्छ तर छिट्टै बोर हुन्छन् यसैले व्यायामको लागि केही नयाँ कुरा निकाली व्यायामा लागि रहनुपर्छ । यो राशि भएकाहरु देख्नमा धेरै आकर्षक हुन्छन् र हेर्दैमा उर्जा र सुन्दरताको अन्दाज लगाउन सकिन्छ । योगाभ्यास गर्नाले दैनिक तनावबाट बच्न सकिन्छ । मुटु, कम्मर तथा ढाडको समस्याले व्यक्तित्वमा विरित असर पर्नसक्छ । सन्तुलित भोजन लिने तथा तौल नबढोस् भन्नेमा ध्यान दिनुपर्छ जसले उमेर बढेपनि फाइदा हुन्छ ।
सिंह राशि भएकाहरु कुनै त्यस्तो काम गर्दैनन् जो यिनहरुको शानको विरुद्ध होस् । प्रशासनिक पदमा यिनीहरुको प्रदर्शन अत्यन्त सुन्दर रहन्छ जहाँ आफ्नो योग्यताले प्रबन्धक या लिडरको रुपमा रहन्छन् । करिब २२ वर्षको आसपास पछि यस्तो लाग्न थाल्छ कि आफ्नो क्यारियर सही दिशामा बढीरहेछ । किनकी यिनीहरु आरामदायी जीवन जिउनमा विश्वास राख्छन् यसैले यिनीहरुको कमाई पनि राम्रो हुन्छ । तर सट्टा तथा जुवाबाट बचेर रहनु पर्छ यसमा कुनै लाभ हुँदैन । सिंह राशिका व्यक्तिहरु प्रायः पैशाको लेनदेनमा फसेका हुन्छन् र यसबाट फइदा हुन्छ या हुँदैन त्यो यिनको भाग्यमा भरपर्छ ।
कन्या राशि भएका व्यक्तिहरु अध्ययनशील प्रवृत्तिको हुन्छन् । विद्धता यिनीहरुको व्यक्तित्वको खास विशेषता हो । यिनीहरु धेरै मेहनत गर्ने खालका हुन्छन् यिनीहरुमा गज्जबको प्रबन्धन क्षमता हुन्छ र समीक्षात्मक दृष्टिकोण राख्ने हुन्छन् जसको कारण कसैको पनि गहिराइमा गई तथ्य निकाल्ने विशेष गुण हुन्छ । यिनीहरु आफ्नो जीवनमा धेरै व्यवस्थित भएर रहन चाहन्छन् । अति व्यवहारिक र कुशल हुन्छन् । अति सन्तुलित र निष्पक्ष निर्णय लिने क्षमताका हुन्छन् । वास्तवमा कन्या राशि भएकाहरु ईमान्दार र स्पष्ठवादी हुन्छन् तर यहि व्यवहार नै यिनीहरुको विरोधमा प्रयोग हुने हतियार बन्न पुग्छ । विषयगत रुपमा सानो सानो तथ्य निकाल्ने कारणले गर्दा कयौं पटक हँसाईको पात्र बन्न पुग्छन् । धेरै पटक यिनीहरु सबल हुँदा हुँदै पनि मानिसहरु यिनको सबल पक्षलाई वेवास्था गरिदिन्छन् जसको कारण यिनीहरु आत्मसमर्पण गर्न पुग्छन् र अवसादग्रस्त भएर रहन्छन् । कन्या राशि भएकाहरुलाई कतिमा मनोवैज्ञानिक समस्याको पनि सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । बाल्यकालमा धेरै संघर्ष गर्नुपर्ने हुन्छ तर वयस्क जीवनको सुरुवातपछि यिनीहरुको जीवनस्तर माथि उठ्न थाल्छ र सबै सुख सुविधाहरु जुटाउन र भोग्न सक्षम हुन्छन् । अध्ययनशील र समीक्षात्मक प्रवृत्तिक भएका कारण कन्या राशि भएकाहरुलाई कार्यस्थलमा धेरै मद्धत पुग्छ । हरेक कुराको सबै पक्षको निरीक्षण गर्नमा यिनीहरु कुशल हुन्छन् । यिनीहरु हरेक कुराको राम्रो प्रबन्धन गर्छन् । यिनीहरुलाई कुर्सीमा बसेर गर्ने कार्यमा विशेष रुचि हुन्छ । रोमान्टिक जीवनको कुरा गर्ने हो भने यिनीहरु आफ्नो साथीलाई धेरै प्रेम गर्ने हुन्छन् । यिनीहरुलाई व्यवस्थित र संन्तुलित जीवन जिउने साथी मनपर्छ । विनाकारण देखावटीमा यिनीहरुलाई विश्वास लाग्दैन । यिनीहरु आफ्नो साथीमा पूर्णताको खोजी गर्छन् र आफ्नो साथीलाई अरुसँग तुलना गर्न पुग्छन् जसले गर्दा सम्बन्धमा तीतोपना आउन सक्छ । हरेक कुरा सिलसिलावद्ध र व्यवस्थित होस् भन्नको लागि यिनीहरुको रिस देखेर कैयौं पटक यिनका साथी रिसाउन सक्छन् र यिनीहरुसँग जीवन बिताउने बारेमा पुनर्विचार गर्न सक्छन् ।
कन्या राशि भएकाहरु सदैव यो चिन्तामा हुन्छन् कि आफू कस्तो देखिन्छु ? कपडा लगाउनमा पनि नखरा धेरै हुन्छ । विना कारण पैशा खर्च गर्दैन् । यिनीहरु समझदार हुन्छन् । जीवनको हरेक पत्र पत्रमा यिनीहरुको दृष्टिकोण धेरै नै तार्किक हुन्छ । यिनीहरु आफ्नो कुरा स्पष्टरुपमा भन्न मन पराउँछन् । यिनीहरुमा चतुराई बिल्कुल हुँदैन । विश्लेषणात्मक दिमाग भएकोले चेस तथा दिमागी खेलमा विशेष रुचि हुन्छ । जसको कारण शारीरिक क्रियाकलामा कमै भाग लिन्छन् । स्कुलमा सँधै अगाडी रहन्छन् र राम्रो क्यारियरको लागि यिनीहरुमा सबै प्रकारको गुण विद्यमान रहन्छन् । यिनीहरु राम्रो डाक्टर या व्यवसायी बन्न सक्छन् । यिनीहरुले आफ्नो वेग तथा तनावलाई नियन्त्रणमा राख्नुपर्छ जो यिनीहरुमा प्राय देखिन्छ । कन्या राशिका युवतीहरु धेरै लजालु र आफैमा हराउने हुन्छन् । यिनीहरु धेरै जसो समय कुराहरु बुझ्नमै बिताउँछन् । यिनीहरुलाई हरेक काम ठीकसँग गर्ने बानी हुन्छन् जसको कारण यिनीहकरु कहिल्यै सन्तुष्ट रहँदैनन् । यी सदैव लिस्ट बनाउनमा व्यस्त रहन्छन् । यिनीहरु आफ्ना पुरुष तथा महिला दुबै मित्र धेरै सोच विचार गरेर मात्र रोज्छन् । यिनलाई आफू जस्तै सोच भएका व्यक्तिहरु बढी मनपर्छ । किनकी कन्या राशि दिमागमा शासन गर्ने हुँदा यस राशिका युवतीहरु छिट्टै डर तथा व्यग्रताको शिकार बन्न पुग्छन् । यी हरेक कुराई पुरा जान्न इच्छुक रहन्छन् । किनकी यिनीहरु धेरै पढाकु र मेहनती हुन्छन् । यसैले कक्षामा यिनीहरुको नम्बर अरुको भन्दा राम्रो रहन्छ । यिनीहरु कुनै पनि काम नाम पाउनको लागि मात्र होइन केही शब्दको प्रशंसाको लागि पनि गर्छन् । यिनीहरुको जीवनसाथी र बच्चासँग खासै सम्बन्ध राम्रो नरहन सक्छ किनकी यिनीहरु प्रायः आलोचना गरिरहन्छन् । यिनलाई कुनै विषय माथि सोध गर्न धेरै मनपर्छ । डाक्टर, नर्स, प्रोग्रामर तथा सम्पादक जस्ता काम यिनलाई धेरै मनपर्छ । साधारण रुपमा कन्या राशि भएकाहरुको प्रेम जीवनमा कहिल्यै कुनै तुफान आई हाल्दैन यिनलाई आफ्रनो प्रेमको प्रदर्शन गर्नु राम्रो लाग्दैन तर शान्त रुपमा यिनीहरु धेरै रोमान्टिक हुन्छन् । वृष, मकर तथा कन्या राशिलाई यिनीहरुको प्रेम गर्ने तरिका धेरै मनपर्छ । यिनीहरुको प्रेमको फुल दिने सिलसिला कहिल्यै बन्द हुँदैन तथा यिनीहरुलाई शान्त तथा एकान्त स्थानमा खाना खान अति मनपर्छ । हुन त यिनीहरु दयालु तथा प्रेम गर्ने हुन्छन् तर हँसी मजाक नगर्ने तथा गम्भिर व्यवहारको कारण कहिले काहिं अरुको मूड खराब गरिदिन्छ । यिनीहरुको बानी अनुसार हरेक कार्य पूर्ण रुपमा हुनपर्छ त्यस्तो नभएमा छिट्टै निराश हुन पुग्छन् । जबसम्म यिनीहरु यो बुझ्दैनन् कि आफूसँग जो हुन्छन् उनीहरुको कामको लागि र साना तिना गल्तिलाई माफ नगरुन्जेल सम्म कसैसँग पनि प्रेमको नाता राख्न सक्दैनन् । कन्या राशि भएकाहरुको घर सफासुग्घर रहन्छ । यिनीहरुको किचनमा केही यस्ता सामान पनि रहन्छन् जसको केही काम हुँदैन तर पनि ती समान हटाउँदैनन् । घर वरपरको सफाईको काम पनि कहिले काहिं यिनीहरुको समस्याको कारण बन्न पुग्छ । यी बाहेक यिनीहरुको वैवाहिक जीवन खासै ठूलो समस्या रहँदैन ।
खानको लागि अत्यन्त चुजी हुनाले धेरै समस्या झेल्न पर्नसक्छ । यिनको खानामा आइरनको मात्र कम हुनाले एनिमियाको शिकार बन्न सक्छन् । उचित मात्रामा क्याल्सियम नमिल्नाले मांसपेशिहरुमा खिचाव या हाड जोर्नी सम्बन्धी पीडाको पनि शिकार हुन सक्छन् । यदि शाकाहारी भए आफ्नो खानामा ताजा फलफुल तथा हरिया सागसब्जी बढाउनु फाइदाको कुरा हुन्छ । मांसाहरीको लागि माछाको सेवन गर्नु उचित हुन्छ । यिनीहरुले दुध तथा दुधबाट बनेका खानेकुराको प्रयोग पनि फाइदाजनक हुन्छ । शाकाहारी व्यक्तिले आफ्नो खानामा प्रोटिन, क्याल्सियम तथा अन्य पोषक तत्व बढाउने खानामा ज्यादा जोड दिनुपर्छ । केहीलाई दाँतको समस्या रहन सक्छ यसैले दाँतको सुरक्षामा ध्यान दिनुपर्छ । यस राशिका व्यक्तिहरु ज्यादा चिन्ता गर्छन जसको कारण मनोवैज्ञानिक समस्याको पनि सामना गर्नुपर्ने हुनसक्छ । यसैले यिनीहरुले पूरा यो कोशिस गर्नुपर्छ कि चिन्ता आफू माथि हावी नहोस् । यसको लागि व्यायाम, योग, संगीत तथा नृत्यलाई अपनाउन सकिन्छ । कन्या राशि भएकाहरु प्रायः जसो रुपरंगको हिसाबले युवावस्थामा धेरै आकर्षक हुन्छन् । कदकाफी पनि औसत रुपमा ठीक हुन्छ तर नाजुकता यिनीहरु भित्र धेरै हुन्छ । जसको कारण कलेजो, मुत्राशयको पीडा आदिको कमजोरी रहनसक्छ जसले गर्दा पाचन सम्बन्धी समस्या पनि हुनसक्छ तर पनि कन्या राशिका व्यक्तिहरु उमेर अनुसार राम्रो हुँदै जान्छ ।
कन्या राशि भएका व्यक्तिहरुको विज्ञान तथा मेकानिकल क्षेत्रमा राम्रो प्रदर्शन रहन्छ । यिनीहरु नयाँ कुराको आविष्कारमा लागि रहन्छन् । यिनीहरु धेरै मेहनती र राम्रो प्रबन्धक हुन्छन् । पृथ्वी तत्वसँग सम्बन्धीत भएकोले जमिनसँग जोडिएको काममा पनि रुचि रहन्छ । यीनलाई पढ्ने लेख्ने शौख रहन्छ तथा हस्तशिल्पीमा पनि झुकाव रहन्छ । केही राम्रा कलाकार पनि हुन्छन् । पैशा कमाउनको लागि यिनीहरुलाई धेरै मेहनत गर्नुपर्छ । यसैले खर्च गर्दा पनि विशेष सावधान रहनुपर्छ ।
तुला राशिका व्यक्तिहरु एक दर्शनीय व्यक्तित्वको स्वामी हुन्छन् । यिनको राशि चिन्ह तुला हो संन्तुलन तिर ईशारा गर्छ । यस राशिका व्यक्तिहरुमा गज्जबको संयम रहन्छ । विपरित भन्दा विपति परिस्थितिमा पनि आफ्नो रिसमाथि नियन्त्रण राख्ने अद्धभूत शक्ति हुन्छ । यिनीहरुको राशि चिन्ह यिनलाई न्यायप्रेमी हुनेतिर संकेत गर्छ । यिनीहरु धेरै नै मृदुभाषी हुन्छन् र सदैव टकरावबाट बचेर रहन चाहन्छन् । हरेक विवादलाई कुराकानीबाट सुल्झाउने स्वभाविक गुण यिनीहरुमा निहित हुन्छ । यिनीहरु धेरै सामाजिक हुन्छन् । एक्लोपन यिनीहरुलाई अजिब लाग्छ तर जब कसैको साथ मिलेर कुनै काम गर्छन् तब आश्चर्यजनक प्रदर्शन गर्छन् । यिनीहरु कुशल रणनीतिकार त हुन्छन् नै कुटनीति पनि यिनमा भरिएको हुन्छ । यिनीहरुको कुनै निश्चित सिद्धान्त हुँदैन मौका अनुसार सम्झौता पनि गर्न सक्छन् । यिनीहरु हतारमा कुनै निर्णय लिन चाँदैनन् जसको कारण यिनका धेरै काम यसै अड्किरहन्छन् र अरुले यिनलाई आलसी भन्न सक्छन् । व्यवहार कुशल यिनीहरु आफ्ना सहकर्मीहरुसँग छिट्टै मेलमिलाप गरिहाल्छन् । आफ्नो मीठो बोली व्यवहार कुशलताको कारण मानिसहरुलाई आफूतिर आकर्षित गरि मित्र संख्या बढाउँछन् । अरुबाट सजिलै आफ्नो काम गराउन सिपालु रहन्छन् । व्यापार तथा वाणिज्यको क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्तिहरु धेरै सफलता प्राप्त गर्छन् । त्यस्तै आफ्नो संचार कौशलको कारण कार्यस्थलमा सजिलै प्रमोशन पाउँछन् । राजनीतितिर लाग्ने पनि आफ्नो भाषणको कारण सफलता प्राप्त गर्छन् । रोमान्टिक जीवनमा यिनीहरु आफ्नो साथीलाई धेरै ईज्जत दिन्छन् । समानताको व्यवहार गर्छन् र बदलामा त्यस्तै व्यवहार आफू पनि अरुबाट चाहन्छन् । यिनीहरुमा केही बहुप्रेमी पनि हुन सक्छन् । यिनीहरु कसैलाई रिसाउन दिन चाहँदैनन् । यिनीहरु टाढिने पनि आफ्नै स्टाइल हुन्छ । यिनीहरु जति सजिलै र छिट्टै विपरित लिङ्गी तिर आकर्षित हुन्छन् त्यसको विपरित बिवाहको लागि धेरै समय लगाउँछन् र धेरै सोच विचार तथा नाफा नोक्सानको हिसाब गरेर मात्र निर्णय लिन्छन् ।
तुला राशिका नवयुवाहरु सदैव यहि चिन्तामा रहन्छन् कि उनीहरु कस्तो देखिन्छन् । यिनीहरु सँधै सही व्यक्तिहरुको साथमा रहन चाहन्छन् । यिनीहरुको कुराकानी गर्ने तरिका मधुर हुनछ । राम्रो कुटनीतिज्ञ भएकोले आफ्नो समुहमा अलग अलग विचार राख्नेहरुलाई पनि मिलाएर राख्न सक्छन् । कहिले काहिं यिनीहरुको व्यवहार धेरै हदसम्म देखावटी पनि देखिन सकिन्छ । यिनीहरुको जीवनको मूख्य उद्देश्य राम्रो कपडा लगाउनु र राम्रा साथीहरुको साथ समय बिताउनु रहन्छ । यिनीहरुको आफ्नै अन्दाज हुन्छ र विलासिताको वस्तुमा पैशा खर्च गर्न मन पराउँछन् । यिनीहरुको सोच उच्च हुन्छ र जुन कुरामा दिमाग लगाउँछन् सजिलै पाएरै छोड्छन् । राम्रो विश्वविद्यालयमा पढ्न चाहन्छन् जो आफ्नो शान मान्दछन् । तुला राशिका युवतीहरु देख्नमा सुन्दर हुन्छन् र धेरै जसो समय प्रशंसकहरुले घेरिएका हुन्छन् । यिनलाई मानिसहरुबाट घेरिएर रहन मनपर्छ । तुला राशिको स्वामी ग्रह शुक्र भएकोले यिनीहरुको आफ्नै अन्दाज हुन्छ । राम्रो भन्दा राम्रो कपडा लगाउन मनपर्छ । यसैले यस राशिका धेरै भन्दा धेरै युवतीहरु फेशन उद्योगमा जान मन पराउँछन् । यस राशिकालाई एक्लै रहन मन पर्दैन । यिनीहरु सामाजिक हुन्छन् तर कहिले काहिं धेरै मानिसहरुले घेरिएर रहने भएकोले गलत पनि सम्झिन्छन् । यिनले आफ्नो पढाईमा ध्यान दिनुपर्छ । यिनलाई कला या सुन्दर क्यारियर बनाउन मनपर्छ ।
भावानात्मक सम्बन्ध बराबरी लेनदेन बाटै चल्छ । तुला राशि भएकाहरु धेरै सम्बधमा अल्झिएर रहेका हुन्छन् यसैले कहिले काहिं यिनीहरुको सम्बन्धलाई गलत पनि सम्झिइन्छ । किनकी विपरित लिङ्ग प्रति छिट्टै आकर्षित हुन्छन् यसैले पूरा जीवनको लागि कुनै वाचा गर्नु अघि धेरै सोच विचार गर्नुपर्ने हुन्छ । मिथुन, तुला तथा कुम्भ राशिका व्यक्तिहरु यिनका राम्रो साथी हुन सक्छन् । तुला राशिका मित्रहरु प्राय पार्टी या भोजको लागि यिनीहरुको घर आइरहन्छन् । किनकी यिनीहरु राम्रो पाहुनको हेरविचार गर्छन् र यो पनि ध्यान दिन्छन् कि कहिं पाहुनाहरुलाई कुनै समस्या नहोस् । यिनीहरु धेरै सामाजिक हुन्छन् र यिनका धेरै मित्र हुन्छन् तर यो अरुको लागि जलनको विषय हुन सक्छ । यिनीहरु धेरै मेहनतका साथ काम गर्छन् यसैले यिनीहरुको परिवारलाई कुनै गुनासो हुँदैन उनीहरुलाई खुशी राख्ने सदा प्रयत्न गर्छन् । यसैले यिनीहरुको पारिवारिक जीवन सुख र शान्तिका साथ अघि बढ्छ । यिनीहरुको घरायसी वातावरण खुसियालीयुक्त र आरामदायी रहन्छ । घरको बाहिर सुन्दर बगैंचा हुन्छ र बगैंचा बनाउने स्थान नभए घरभित्र कुनै न कुनै बोट विरुवा रहन्छ ।
हुनत तुला राशिकाहरुको स्वास्थ्य राम्रो रहन्छन तर केहीमा अस्थमा, एलर्जी, फ्ल्यु या रुघाखोकीको समस्या रहनसक्छ । यिनीहरु धेरै क्रियाशिल रहन्छन् । अरुको हेरविचारमा आफ्नो जीवनको लामो समय बिताउँछन् । केही तौल पनि बढ्न सक्छ तर यसलाई कम गर्नमा समस्या हुदैन किनकि यिनीहरुलाई नृत्य तथा खेलकुदमा पनि रुचि रहन्छ । तुला राशिकाहरुको रंग सफा, दाँत तथा कपाल सुन्दर र सफा हुन्छ । साथै आँखा पनि सुन्दर हुन्छ र पनि धेरैको आँखाको समस्या हुन सक्छ र चस्माको प्रयोग गर्नुपर्ने हुनसक्छ । स्वस्थ हुन्छन् र धेरै उर्जावान् हुन्छन । अनुहार सुन्दर सफा हुन्छ । बाल्यकालमा त्यति बलियो देखिदैनन् र सानो सानो बिमारीले पनि समाइहाल्छ तर बढ्दो उमेर सँगै सिर्फ कल्पनामा मात्रै बिमार रहने गर्छन । यस राशिका जो कमजोर हुन्छन् उनीहरुलाई पेट, मुत्राशय सम्बन्धी पीडा, किड्नी तथा ढाडको समस्याले सताउन सक्छ ।
तुला राशि भएकाहरु कुशल वकिल या न्यायधिश हुन सक्छन् । कला, विशेष गरि संगीतको क्षेत्रमा राम्रो प्रदर्शन गर्न सक्छन् । विज्ञान तथा समुद्रीज्ञानले पनि आकर्षित गर्छ । यसको साथै मदिरा फ्याक्ट्रीको प्रबन्धन पनि कुशलतापूर्वक गर्न सक्छन् । यिनीहरुको काम र उत्पादन क्षमतामा यिनीहरुको मूडको पनि प्रभाव पर्छ । जुन समयमा यिनीहरुको मूड राम्रो रहन्छ यसको प्रभाव पनि राम्रो पर्छ । वित्तिय रुपमा यिनीहरु भागयमानी हुन्छन् । यिनमा धेरै जसोको विवाह त्यस्तो व्यक्तिहरुसँग हुन्छ जो यिनीहरु भन्दा वित्तिय रुपमा धेरै मजबुत हुन्छन् । यसको अलावा व्यवासायिक साझेदारीमा पनि फाइदा हुन्छ । यिनीहरु दिल खोलेर पैशा खर्च गर्छन् र यदि कुनै बेला यिनीहरुसँग पैशाको कमि भएमा यिनका मित्रहरु तथा आफन्तहरु सहयोगको लागि सदैव तयार रहन्छन् ।
वृश्चिक राशिका व्यक्तिहरु आकर्षक एवं रहस्यमय देखिन्छन् । यस राशिको स्वामी मंगल हो जसको यिनीहरुको व्यक्तित्व दवंग एवं रिसाहा हुन्छ । स्वभावतः निडर, गंभीर एवं जिद्धी हुन्छन् । यिनीहरुको तिव्रताको अनुमान कसैले लगाउन सक्दैन । यिनीहरुमा गहिरो अन्तर्ग्यान हुन्छ । अति जिज्ञासु स्वभावको हुन्छन् जसले गर्दा सन्तुष्ट हुँदैनन् । दृढ निश्चियी र स्पष्टवादी हुन्छन् साथै धेरै हदसम्म संदिग्ध व्यक्तित्वका यिनीहरु धेरै राम्रो, इमान्दार र वफादार मित्र बन्न सक्छन् भने एक अति क्रुर, कपटी र खतरनाक दुश्मन पनि बन्न सक्छन् । हुनत यिनीहरु धेरै धैर्यवान् र प्रतिबद्ध र रचनात्मक पनि हुन्छन् तर उदारता र मिलनसारिता यिनीहरुलाई मन पर्दैन । यिनीहरुमा बदलाको भावना अति गहिरो रुपमा रहेको हुन्छ र आफ्ना विरोधीलाई अचानक चोट पुर्याउने सोच राख्छन् । हुनत यिनीहरु धेरै भावुक र संवेदनशील पनि हुन्छन् तर यिनीहरु भित्रको जटिलता सामुन्नेको व्यक्तिमा एक अनिश्चित डर र भयको संचार पनि गर्नसक्छ । खोजी स्वभावका यिनीहरु कार्यस्थलमा पनि धेरै ध्यानपूर्वक कार्य गर्छन् । कार्यक्षेत्र सम्बन्धीत शोध कार्य गर्नमा यिनमा विशेष रुचि हुन्छ । यहि प्रवृत्तिको कारण धेरै जानकारी जुटाउँछन् र आफ्नो ज्ञानको आधारमा सफलता पनि पाउँछन् । नकारात्मक परिस्थितिमा पनि सकारात्मक परिणाम प्राप्त गर्ने किरा यिनीहरुमा हुन्छ । यसैले कार्यस्थलमा वरिष्ठ अधिकारीहरु तथा सहकर्मीहरुमाट यिनीहरु माथि विशेष आशा र भरोसा रहन्छ । रोमान्टिक रुपमा हेर्ने हो भने यिनीहरु धेरै राम्रो प्रेमी सावित हुन्छन् । यिनीहरु आफू सामुको व्यक्तिको नाडी सजिलै छाम्न सक्छन् र उसले के चाहन्छ सजिलै पहिचान गर्न सक्छन् । तर यिनीहरुको सवाल गर्ने प्रवृत्तिको कारण यिनीहरुको साथीले असहज महशुस गर्न सक्छ । यिनीहरुलाई बुझ्नु टेढो खिर जस्तै हुन्छ र यहि कारणले असुरक्षा एवं अनिश्चयको भावना पनि उत्पन्न हून्छ तर यिनीहरु ज्यान दिएर प्रेम गर्छन् र सारा गल्ति माफ हुनसक्छ ।
यिनीहरु त्यस्तो नवजवान हुन्छन कि यिनीहरु के सोच्दैछन् भन्ने कुरा कसैलाई पत्ता लाग्न दिंदैनन् । यिनीहरुमा अत्यन्त आकर्षण हुन्छ तर कहिले काहिं यिनीहरु अत्यन्त घातक र अभद्र पनि हुन सक्छन् । यिनीहरुको हरेक व्यक्तिको बारेमा आफ्नै राय हुन्छ तर अरुले उनीहरुलाई बुझ्ने कोशिस गर्नुपर्छ । यिनीहरुलाई खेल त मनपर्छ तर त्यसमा प्रतिस्पर्धा छ भने मात्र । यिनीहरु पानी तत्व सम्बन्धीत भएकोले यिनीहरुको बारेमा केही भन्नु र यिनीहरुको व्यवहार बुझ्न सक्नु असंभव हुन्छ । यिनीहरु अचानक परिवर्तन भइ रहन्छन् । यदि काम यिनीहरुको अनुसार भएमा यिनलाई मन पर्दैन । यिनीहरुलाई चुनौतीयुक्त कार्य गर्न मनपर्छ । जीवनको प्रति यिनीहरुको आफ्नै नजरिया रहन्छ तथा यिनीहरु पूरा रुपमा यसैमा केन्द्रित रहेर अघि बढ्छन् । यिनीहरु पूर्णरुपमा आत्मविश्वासी हुन्छन् र सदैव मनिसहरुले घेरिएर रहन्छन् तर यो पनि याद राख्नुपर्छ कि बिच्छिको डस्ने शक्ति यिनीहरुको पुच्छरमा रहन्छ जुन अत्यन्त खतरनाक हुन्छ । वृश्चिक राशिका युवतीहरु पनि रहस्यमयी तथा आश्चर्यले भरिएका हुन्छन् । यिनीहरुको ध्यान आफ्नो उद्देश्यमा पूर्णरुपमा केन्द्रित रहन्छ । र यसलाई प्राप्त गर्नमा यिनीहरुलाई कसैले रोक्न सक्दैन । यिनीहरु अधिकार सम्बन्धी हुन्छन् र कहिले काहिं आफ्नो कार्य पूरा गर्नको लागि बेइमानी गर्न पनि पछि पर्दैनन् । किनकी यिनीहरुको मूड अचानक बद्लिन्छ यसैले कहिले काहिं यिनीहरुलाई साथ दिने कोही पनि हुँदैनन् । यिनीहरु भावुक हुन्छन् र आफ्नो वरपरको दुनियालाई बुझ्नको लागि आफ्नो अन्तर आत्माको आवाजमा भरोसा गर्छन् । यिनीहरुलाई प्रतिष्पर्धात्मक खेल मनपर्छ । यिनीहरु अति जिद्धी हुन्छन् यसैले कुनै पनि काम आधा अधुरो छोड्दैनन् । यिनीहरुको बारेमा केही भन्न सकिदैन । एक पलमा खुशी भएका हुन्छन् भने कुन पलमा यिनीहरुको मूड खराब हुन्छ थाहा हुँदैन । यो कुरा यसरी पनि जानौं कि एक दिन यिनीहरु ठीकसँग ओढ्ने नओढी घरबाट बाहिर पनि निस्कदैनन् तर अर्को दिन कसरी निस्कन्छन् थाहा नै हुँदैन मानौं कपाल समेत नकोरेका हुन्छन् । स्कुलमा पनि यिनीहरु आदर्श विद्यार्थी त हुँदैनन् तर आफ्नो मेहनत र लगनशीलतको कारण ती सबै कुरा पाएरै छोड्छन् जुन पाउँन चाहन्छन् ।
यिनीहरु धेरै राम्रो प्रेमी हुन्छन् र यो कुरा भन्नु अगावै बुझ्छन् कि आफ्नो साथीले के चाहन्छ । यिनीहरु यति धेरै अधिकार सम्बन्धी हुन्छन् कि यिनका कोही पनि प्रेमी यिनलाई भुल्न सक्दैनन् । यिनीहरु साँचो प्रेम र टाइम पास प्रेममा फरक नै बुझ्दैनन् । सबैसँग पूर्ण रुपमा जोडिन पुग्छन् । यो राशि धेरै जलन लिने खालका हुन्छन् र यदि कसैले यिनलाई टेन्सन दिएमा कुनै हदसम्म पनि जान सक्छन् । कर्कट, वृश्चिक तथा मीन राशि भएकाहरु यिनीहरुको सही साथी प्रमाणित हुन्छन तथा यिनीहरुलाई उनीहरुले राम्रोसँग बुझ्न सक्छन् । यिनीहरुको आफ्नो परिवारसँग झैँ-झगडा पनि हुनसक्छ किनकी यिनीहरुलाई लाग्छ कि आफूलाई र आफ्नो प्रेमलाई उनीहरुले राम्रोसँग बुझ्दैनन् । हुनत यिनीहरु राम्रो अभिभावक हुन सक्छन् तर विना कुनै कारण यिनीहरु कुनै पनि बेला आफ्नो निर्णयमा पल्टिन सक्छन् जसको कारण बच्चाहरुसँग यिनीहरुको सम्बन्धमा तिक्तता आउन सक्छ । यिनीहरुको घर सुन्दर र आरामदायी हुन्छ ।
वृश्चिक राशि भएकाहरुलाई बुझ्न धेरै मुश्किल हुन्छ । यिनीहरु पूरा रुपमा रहस्यमय हुन्छन् । खानको लागि मनपर्ने र मन नपर्ने कुरामा अल्झिरहन्छन् । यिनीहरुमा केहीको तौल बढ्न पनि सक्छ त केही धेरै दुब्लो पनि हुन सक्छन् । आफ्ना समस्याहरुलाई मन भित्रै गुम्साएर राख्ने बानीले गर्दा पाचन सम्बन्धी समस्या हुनसक्छ र परिणम स्वरुप केही धेरै खाने गर्छन् भने केही धेरै कम खान्छन् । केहीलाई अनिन्द्राको बिमारी पनि हुनसक्छ जुन धेरै चिन्ता लिनु हुँदैन । व्यायाम यिनीहरुको तनाव कम गर्ने राम्रो माध्यम हुनसक्छ । यिनीहरुको छाला अति सुन्दर हुन्छ र देख्नमा धेरै नै आकर्षक हुन्छन् । जति जति उमेर बढ्दै जान्छ त्यति वजन बढ्दै जान्छ । यिनीहरुलाई छिट्टै संक्रमण हुन्छ र धेरै जसो ज्वरोले पीडित रहन्छन् । यस राशि भएकाहरुलाई गला, पेट तथा मुत्राशयमा कुनै समस्या हुने संभावना रहन्छ । यसैले यिनीहरु संक्रमित बिरामी प्रति सजग रहनुपर्छ ।
विज्ञान विषय यिनीहरुको लागि अति उत्तम रहन्छ तथा फिजिशियन या सर्जनको रुपमा पनि राम्रो गर्न सक्छन् । आर्किटेक्चर तथा मेकानिकल क्षेत्र पनि उत्तम हुनसक्छ । यिनीहरु उद्योगमा होस् या आर्मीमा एक कुशल कमाण्डर सावित हुन्छन् । यिनमा केहीको झुकाव आर्ट, साहित्य या पत्रकारितामा पनि हुन्छ तथा यी क्षेत्रमा राम्रो प्रदर्शन गर्न सक्छन् । भविष्यमा सफलता पाउनको लागि लामो यात्रा गर्नु पर्दैन । बरु लामो यात्रा कहिले काहिं विपरित परिणामदायक पनि हुन सक्छ । व्यवसायमा यिनको दिमाग धेरै राम्रो चल्छ र आफ्नो लगानीको लागि ठीक योजना बनाउँछन् । यिनीहरुको उद्देश्य ज्यादा भन्दा ज्यादा पैशा कमाउने नै हुन्छ । तर यिनीहरुलाई थोरै सन्तोष राखी आफ्नो उद्देश्य प्राप्त गर्नको लागि कुनै गलत तरिकाको प्रयोगबाट बच्नुपर्छ ।
धनु राशिमा जन्मिएका व्यक्तिहरु धेरै उत्साही, प्रभावशाली व्यक्तित्व र परोपकारी भावनाका हुन्छन् । यिनीहरु ईमान्दार र उदार हुन्छन् साथै अध्ययनशील प्रवृत्तिका हुन्छन् । धनु राशिको चिन्ह घोडा र मानव शरीरको मिश्रित रुप हो र जसको तलको भाग घोडा र कम्मर देखि माथिको भाग मानवको जसले धनुषले निशाना ताकेको हुन्छ । यो यिनीहरुको लक्ष्यको प्रति प्रतिवद्धता दर्शाउँछ । अर्थात यस राशिका व्यक्तिहरु लक्ष्यप्रति एकोहोरो हुन्छन् । सामाजिक रुपमा पनि यिनीहरु धेरै सक्रिय रहन्छन् । यिनीहरु सदा गतिशील रहन्छन् । नेतृत्व गर्ने अपार संभावना यिनीहरुको भित्र हुन्छ । क्यारियरको क्षेत्रमा हेर्दा यिनीहरु लक्ष्य प्रति सचेत रहन्छन् र त्यसलाई प्राप्त गर्नको लागि सो दिशामा निरन्तर गतिशील रहन्छन् । यस राशिकाहरुलाई लक्ष्यबाट भट्काउन धेरै गाह्रो हुन्छ । कार्यस्थलमा यिनीहरुलाई धेरै सफलता र मान सम्मान मिल्छ । आफ्ना सहकर्मी तथा वरिष्ठकर्मीहरुलाई सदा आफ्नो तर्कले सन्तुष्ट बनाउँछन् । नयाँ नयाँ कुराको जनकारी राख्नु यिनीहरुलाई धेरै राम्रो लाग्छ । कार्यस्थलमा यिनीहरुको हिसाब किताब धेरै स्पष्ट हुन्छन् । परिस्थितिको उचित आंकलन गरि भविष्यको सटिक पूर्वानुमान लगाउनमा माहिर यिनीहरुको सल्लाह र सुझाव सहकर्मीहरुको लागि धेरै महत्व राख्छ । सामाजिक रुपमा धेरै सक्रिय हुन्छन् यसैले यिनीहरुको रोमान्टिक जीवन राम्रो हुन्छ । मानिसहरु यिनीहरु तिर आकर्षित हुन्छन् । यिनीहरु काफी स्पष्ट र खुला विचारका हुन्छन् तथा आफू जस्तै खुला विचारका साथी मन पराउँछन् । आफू विश्वास योग्य हुन्छन् तर अरुप्रति कम विश्वास गर्छन् । यदि यिनीहरुको रुचि धनु राशि भएकासँग मेल खाएमा यिनीहरुको राम्रो सम्बन्ध हुन सक्छ ।
धनु राशिका नवयुवकहरु स्वतन्त्रताका साथ पूरा दुनिया घुम्न मन पराउँछन् । यिनीहरुको सपना ठूलो हुन्छ । जुन कुरा यिनीहरुलाई मनपर्छ त्यसको सच्चाईमा कुनै संशय रहँदैन । यिनीहरु स्वतन्त्र विचारका हुन्छन् र कुनै पनि बन्धनमा बाँधिने विचारसम्म मन पराउँदैनन् । यिनीहरुको खास विशेषता यो हो कि यिनीहरु कुनै पनि विचारलाई स्वीकार्नको लागि तयार रहन्छन् यसैले सबै प्रकारका मानिसहरुसँग यिनीहरुको मित्रता सहजै हुन्छ । साथै आफ्नो स्वतन्त्र विचारधाराले गर्दा यिनीहरु अरुको अगाडी खास चर्चित रहन्छन् । यिनीहरु आफ्ना मित्रहरु प्रति दयालु रहन्छन् । यिनीहरुको साथमा धेरै उर्जा हुन्छ र खेल्नु नै यस उर्जाको सही प्रयोग हो । यो राशि भएकाहरु सदैव आफ्नो सपना पूरा गर्नको लागि व्यस्त रहन्छन् । धनु राशिका युवतीहरुको साथ धेरै मज्जाको हुन्छ । यिनीहरुको लागि साथको कहिल्यै कमि हुँदैन । यिनीहरु सदैव उर्जावान रहन्छन् र सँधै केही न केही नयाँ गर्ने तयारीमा हुन्छन् । यिनीहरु आफ्नो मनको कुरा जो कोहीको सामु पनि भनिदिन्छन् जसको कारण समस्याको सामना पनि गर्नुपर्ने हुन्छ । यिनीहरु वरपरका मानिसहरु यो बुझ्न सक्दैनन् कि यिनीहरु धेरै ईमान्दार हुन्छन् । कुनै काम यिनीहरुलाई राम्रो लाग्छ भने त्यो काम गर्नबाट पछि हट्दैनन् । यिनीहरुलाई ऐनाको सामु उभिएर धेरै समय बिताउन मन पर्दैन र यिनीहरु आफ्नो कपडा अरुलाई दिन पनि चाहँदैनन् । यस राशिका युवतीहरु स्कुलमा राम्रो प्रदर्शन गर्छन् र उच्च शिक्षाको लागि विदेश पनि जान सक्छन् ।
हुनत यिनीहरुमा धेरै प्रेम भरिएको हुन्छ तर आफ्नो प्रेम देखाउनमा यिनलाई विश्वास लाग्दैन । प्रेममा जिस्किनु, उपहार दिनु या फूलको वर्षा गर्नु यिनीहरुको आदत हुँदैन तर यहि कारणले यिनीहरुलाई भावनात्मक रुपमा ठन्डा सम्झिइन्छ । जबकी यिनीहरु आफ्नो प्रेमीलाई आफ्नो प्रेमको महशुस गराउँछन् । आफ्नो साथीसँग घोडा सवारी गर्नु, पहाडको यात्रा गर्नु तथा बन्जीजम्प आदि गर्नुमा रुचि हुन्छ । धनु राशि लगायत मेष र सिंह राशिकाहरु यिनीहरुको कदममा कदम मिलाएर हिंड्छन् र यिनीहरुलाई राम्रोसँग बुझ्दैनन् । जो यिनीहरुको साथ निभाउन सक्दैनन् यिनीहरुसँग विवाह प्रायः असफल रहन्छ । यिनीहरु एक राम्रो साथी प्रमाणित हुन्छन् । यिनीहरु मजा र रमाइलोलाई बढी ध्यान दिन्छन यसैले बच्चा चाँडो हुँदैन । आफ्नो साथीलाई पूरा इज्जत दिनको लागि आफ्नो पूरा संयमको प्रयोग गर्छन् । यिनीहरुलाई खतरा मोल्न बढी मनपर्छ र धेरै जसो यसको लागि तयार रहन्छन् तर यिनीहरुले यो ध्यानमा राख्नु पर्छकी यिनीहरुको परिवार यिनीहरु माथि निर्भर रहन्छन् । धनु राशिका व्यक्तिहरुको घर केही अलग तरिकाको हुन्छ यहाँ त्यहाँको हेरेर जोडतोड गर्नु यिनीहरुलाई मन पर्दैन ।
धनु राशिकाहरुलाई हँसी रमाइलो गर्न मनपर्छ र यिनीहरु जीवनलाई पूर्णरुपमा जीउन मन पराउँछन् । यसैले यिनीहरुलाई तनाव सम्बन्धी बिमारी हुँदैन । यिनीहरु कुनै कुरालाई गम्भिरताको रुपमा लिदैनन् चाहे उनीहरुको बिमारी नै किन नहोस् । यिनीहरुलाई डाक्टरको सामु जानै पर्दैन । सारा राशिहरुमा धनु राशिहरु सबैभन्दा बढी हिम्मतीला हुन्छन् । एउटै समस्या हुन्छ कि यिनीहरुलाई चोट र मकाई छिट्टै हुन्छ । यिनीहरु कुनै पनि नयाँ खेल खेल्न र रोमाञ्चक कामको लागि तयार रहन्छन् । यिनीहरुले कुनै व्यायाम गर्नु र केही तातो हुनु राम्रो । यसको अलावा कुनै नयाँ काम गर्नु अघि पूरानो चोट ठीक हुन दिनुपर्छ । यिनीहरु सफा रंग, चटकी आँखा र तिखो नाकको स्वामी हुन्छन् । ताजा फल तथा सब्जिको सेवन तथा दूध र दूधले बनेको पदार्थ खानु स्वास्थ्यको लागि धेरै राम्रो हुन्छ । केही नर्वस सिस्टमको खराबीको शिकार हुन सक्छन् । धनु राशिका व्यक्तिहरुलाई शरिको तल्लो भागमा चोटको खतरा हुन सक्छ ।
बाहिर रहेर गर्ने काममा यिनीहरुको प्रदर्शन धेरै राम्रो रहन्छ । यिनीहरु राम्रो खेलाडी हुन सक्छन् । प्राध्यापक, राजनेता तथा वकिलको रुपमा पनि सफल हुन सक्छन् । व्यवसाय तथा बैंकिङ्ग पनि यिनको लागि राम्रो हुनसक्छ । यदि कुनै बेला यिनीहरुलाई यो लाग्छ कि आफ्नो काममा बोर लागिरहेछ तब तुरुन्त कुनै नयाँ काममा जोडिनु राम्रो हुन्छ । अमिरी तथा उच्च पद दिने बृहस्पति यिनीहरुको स्वामी हो जबकी यिनीहरु जीवनमा सबैकुरा पाउन सक्छन् तर थोरै ढीला हुन्छ । ३० वर्षको उमेरसम्म केही फाइनान्सियल समस्यामा रहनुपर्छ । यसको कारण केही अभद्र व्यवहार पनि हुनसक्छ तर यिनीहरु आफ्नो गल्तिबाट पाठ सिक्छन् यसैले कुनै वृत्त नोक्सानीबाट यिनीहरुलाई कुनै खासै फरक पर्दैन तर जब यिनीहरु पूर्णरुपमा स्थापित हून्छन् तब पनि उधारीले भने पिछा छोड्दैन ।
मकर राशिको स्वामी ग्रह शनि हो जसलाई पाप ग्रह मानिन्छ तर शनि धेरै न्यायप्रिय ग्रह हुन्छ । शनिले मकर राशि भएकाहरुलाई मेहनती बनाउँछ र मेहनतले नै उचित फल प्रदान गर्दछ । यस राशि भएकाहरु धेरै मेहनती हुन्छन् र अनुशासन यिनीहरुको व्यक्तित्वको अत्यन्त महत्वपूर्ण भाग हो । हुनत हेर्दामा यिनीहरु कठोर लाग्न सक्छन् तर वास्तवमा यिनीहरु अत्यन्त विनम्र र राम्रो विचारधाराको धनी हुन्छन् । यिनीहरु एक जिम्मेवार नागरिकको भूमिका पनि राम्रोसँग पूरा गर्छन् । दृढ संकल्पी र अत्यन्त व्यवहारिक हुन्छन् । समर्पणको भाव पनि यिनीहरुमा धेरै भरिएको हुन्छ । धेरै सहिष्णु हुन्छन् । साधारणतया यिनीहरुलाई रिस उठ्दैन र उठे पनि ढिला उठ्छ तर शान्त हुनपनि समय लाग्छ । प्रत्येक कामलाई निस्वार्थ भावले गर्नु आफ्नो कर्तव्य सम्झन्छन् । झक्तिको भावना भरिएको र धार्मिक प्रवृत्तिका हुन्छन् । कुल मिलाएर भन्दा यिनीहरुको व्यक्तित्व धेरै विश्वसनीय हुन्छ । कार्यस्थलमा पनि यस राशिकाहरु आफ्नो कार्यमा लीन रहन मन पराउँछन् । यिनीहरुको परिचय एक कर्मठ कर्मचारीको रहन्छ । यिनीहरु बहुमुखी प्रतिभाको धनी हुन्छन् । कार्यस्थलमा गम्भिर देखिने यिनीहरु कार्यालय सम्बन्धी पार्टीहरुमा आफ्नो अलग छाप छोडेर सबैलाई हैरान पार्छन् । यिनीहरु आफ्नो फाइललाई धेरै सम्हालेर राख्छन् । कुनै काम हातमा लिनु अघि त्यसको अतित देखि भविष्यसम्मको अन्दाज लगाउने क्षमता यिनहरु भित्र हुन्छ । यिनीहरुलाई जुन काम सुम्पिइन्छ त्यो पूरा गरेरै छोड्छन् । यिनीहरुको रोमान्टिक जीवन धेरै राम्रो हुन्छ । यिनीहरु अधिक समर्पित खालका हुन्छन् र आफ्नो साथी प्रति वफादार रहन्छन् । यिनीहरुको मेहनती बानी र अनुशासन प्रियताले मानिसहरु यिनीहरुतिर आकर्षित हुन्छन् । यिनीहरु धेरै सहिष्णु भएकोले साथीको कुरा पनि धेरै नराम्रो मान्दैनन् तर यिनीहरु रिसाए भने यिनीहरुको रिसबाट बच्नु चाहिं धेरै गाह्रो कुरा हो र यिनीहरु धेरै ढिला मात्र शान्त हुन्छन् । समर्पित र वफादार मन पराउनेहरुको लागि मकर राशि भएकाहरु राम्रो रोजाई हुन सक्छन् ।
मकर राशिका युवकहरु आफ्नो समय रमाइलो गर्नमा बिताउँदैनन् किनकी सुरु देखि नै केही न कही काम सोची रहन्छन् । सामाजिकतामा समय गुमाउनु साटो केही न केही महत्वपूर्ण काममा व्यस्त रहन्छन् । यिनीहरु कसैसँग अभद्रताको व्यवहार गर्न चाहँदैनन् तर निश्चित काम समय सीमामा सिध्याउनको लागि कहिले काहिं अधिकार देखाउने जस्तो व्यवहार चाहिं गर्न सक्छन् । आफ्नो खाली समयमा प्रतिष्पर्धात्मक खेल खेलनमा रुचि हुन्छ । हारसँग सम्झौता गर्न यिनीहरुलाई मुश्किल हुन्छ । यसको लागि यिनीहरुलाई आफ्नो प्रतियोगी साथीको आवश्यकता पर्छ । यिनीहरु व्यवहारिक र जिम्मेवार हुन्छन् यसैले यिनीहरुलाई कुनै पनि जिम्मेवारी सुम्पिन सकिन्छ । दिनको अन्तमा यिनीहरुलाई आफ्नो सफलता गन्नु रमाइलो लाग्छ । एकदिन यिनीहरुको मेहनत यति काम लाग्छ कि सारा दुनियामाथि शासन गर्न सक्छन् । यस राशिका युवतीहरु अध्ययनशील र बुद्धिमान हुन्छन् । यिनीहरुलाई काम बाहेक अर्को केही कुरा देख्दैनन् । यिनीहरु आफ्नो कक्षामा प्रथम नै हुन्छन् र उच्च इच्छा राख्ने युवतीहरुको लागि यो पहिलो कदम हो । यिनीहरु प्राय जसो सबै सँग मित्रता राख्छन् र यसले यिनीहरुलाई आफ्नो लक्ष्य प्राप्तीको लागि सहयोग पुग्छ । तर जिन्दगीलाई ज्यादा गम्भिरताले नलिनाले यिनीहरुलाई धेरैको मेहनतको मद्धत आवश्यक पर्छ । व्यवहारले यिनीहरु रचनात्मक हुनाले युवतीहरु वास्तविकताको नजिक हुन्छन् । जीवन प्रतिको सकारात्मक दृष्टिकोणले सँधै सही काम गर्न यिनीहरुलाई मद्धत पुर्याउँछ । सही प्रबन्धन गर्ने क्षमताको कारण यिनीहरु आफ्नो लक्ष्य सजिलै प्राप्त गर्छन् ।
यिनीहरुको प्रेम साँचो हुन्छ जुन शनि ग्रहको शुभ दशाको कारण हुन्छ र यिनीहरुलाई पूरा अनुशासित राख्छ । यसले यिनीहरुलाई शान्त राख्छ, व्यवहारिक तथा गम्भिर बनाई राख्छ । यिनीहरुको यहि विशेषताले गर्दा विवाहको लागि सही साथीको चयन गर्छन् र पछि गएर यिनीहरुको अभिमानको कारण बन्छ । वृष, कन्या तथा वृश्चिक राशि भएकाहरु यिनीहरुको राम्रो साथी बन्न सक्छन् । यिनीहरु आफ्नो साथीप्रति वफादार रहन्छन् । महिला या पुरुष जो भएपनि यिनीहरु आफ्नो घरलाई धेरै प्रेम गर्छन् तर घरेलु झगडा यिनलाई मन पर्दैन चाहे आफ्नो होस् या अरु कसैको यदि यिनीहरु कुनै मकर राशि भएकासँग विवाह गर्छन् भने माइती बाहेक घर पक्षलाई पनि प्रेम गर्न तयार रहनुपर्छ । यिनीहरु हतारमा विवाहको निर्णय गर्दैनन् र विवाह पछि डिभोर्स जस्तो कुरामा पनि विश्वास राख्दैनन् । यदि यस्तो भएमा अरु कसैलाई सोच्न सक्दैनन् ।
हुनत मकर राशिवालाहरु आफ्नो युवा अवस्थामा असुरक्षा र भयग्रस्त रहन्छन् तर पछि शनिको छत्रछायामा विस्तारै धेरै ठीकठाक रहन्छन् । हुनत अधिकांश मकर राशि भएकाहरु खासै बिरामी त हुँदैनन् तर यदि बिरामी भएमा त्यो कुराले दिलमा छुन्छ । यदि यस तनावबाट मुक्त हुन सकेनन् भने हर्टअट्याक, उच्च रक्तचाप जस्ता रोगले सताइन सक्छन् । मकर राशिको सूर्य त कमजोर हुन्छ तर चन्द्रमा या शनिले कष्ट नपुर्याए यिनीहरुको आयु लामो हुन्छ । यिनीहरुलाई दुर्घटनाबाट घुँडा, हड्डीको जोर्नी या खुट्टाको हाड फुट्नु, सुन्नीनु या मर्किनु र घाउ हुनु सामान्य हो । यिनीहरुको संवेदनशील छाला पनि बेलाबखत एलर्जीको शिकार हुनसक्छ । यिनीहरुको लागि नित्य व्यायाम, मालिश र ताजा फलफुल तथा हरियो साग सब्जीको सेवन लाभदायक रहन्छ ।
मकर राशि भएकाहरु राम्रो व्यवसायी हुन्छन् । यिनीहरु चतुर र मेहनती हुन्छन् । कमै मात्र गलत निर्ण लिन्छन् । यिनीहरु धेरै उच्च इच्छा राख्नेवाला हुन्छन् यदि आफ्नो क्यारियर नभए आफ्नो साथीको सफलताको लागि प्रेरित गरिरहन्छन् । प्रतिष्पर्धाको चक्करमा पर्दैनन् तथा आफ्नो काम शान्तिपूर्ण तरिकाले गर्नमा विश्वास राख्छन् । पढाई, खेती तथा उद्योगको क्षेत्रमा यिनीहरुको प्रदर्शन प्रशंसनीय रहन्छ । पुरातत्वका महत्वका वस्तुहरुको लेनदेन गर्नु पनि यिनीहरुको लागि राम्रो व्यवसाय हुन्छ । पैशा अचानक वर्षातको रुपमा यिनीहरुको सामु आउँदैन यसको लागि यिनीहरुलाई धेरै मेहनत गर्नु पर्छ । चालिस वर्षको उमेरसम्म यिनीहरु आफैले आफूलाई राम्रोसँग स्थापित गरिसक्छन् ।
कुम्भ राशि भएकाहरु मानवतावादी प्रवृत्तिको हुन्छन् । जस्तो कि यिनको राशि चिन्ह कुम्भ हो जसको तात्पर्य यिनीहरुको व्यक्तित्व गम्भिर र गहिरो हुन्छ । यिनीहरु धेरै प्रगतिशील हुन्छन् र परोपकारको भावना यिनीहरुको व्यक्तित्वको अहं भाग हुन्छ । यिनीहरुको सोच धेरै निष्पक्ष हुन्छ । यिनीहरु आधुनिक विचारका हुन्छन् र व्यवहारिकतालाई प्राथमिकता दिन्छन् । यिनीहरुको वैचारिक धरातलमा कसैको हस्तक्षेप मनपर्दैन । यिनीहरु स्वतन्त्रता प्रेमी हुन्छन् । यिनीहरुको स्वभाव मिलनसार हुन्छ यसैले यिनीहरुको मित्र धेरै हुन्छन् । यिनीहरु धेरै अलग विचारका हुन्छन् । यिनमा विचारहरुको युद्ध चलिरहन्छ र कुनै निष्कर्षमा पुग्न धेरै समय लगाउँछन् । यिनीहरु धेरै संवेदनशील पनि हुन्छन् र विचारमा दार्शनिकता पनि भेटिन्छ । क्यारियरको कुरा गर्दा कार्यस्थलमा यिनीहरुलाई चुनौतीपूर्ण कार्य मनपर्छ । यिनीहरुलाई नयाँ खोज गर्न धेरै आनन्द आउँछ र आफ्नो धेरै समय कार्यस्थलमा बिताउन मनपर्छ । यिनीहरुलाई कार्यालयी राजनीति मन पर्दैन । यिनीहरुलाई सिर्फ कामको मतलब हुन्छ । यिनीहरु पूरा निष्ठा र सेवाभावले कार्यप्रति समर्पित हुन्छन् । आफ्नो शान्त, गम्भिर र कर्मठ व्यवहारले यिनीहरु कार्यस्थलमा विशिष्ठ परिचय बनाउँछन् र जो सहकर्मीलाई आवश्यकता हुन्छन उनीहरुलाई सहयोग गर्नमा धेरै रमाउँछन् । रोमान्टिक क्षेत्रको कुरा गर्दा यिनीहरु धेरै खुला विचारका हुन्छन् र स्वतन्त्र सोच भएका व्यक्तिहरु नै यिनीहरुलाई मनपर्छ । यिनीहरु धेरै संवेनशील हुन्छन् तर विवाहको प्रति यिनीहरुको सोचाई धेरै तार्किक र बौद्धिक हुने गर्छ । हावादारी महल बनाउनु यिनीहरुको बसको कुरा होइन । यिनीहरु यथार्थमा जिउन मन पराउँछन् र बिग्रेकोलाई राम्रो र राम्रोलाई अझ धेरै राम्रो बनाउन तिर अग्रसर रहन्छन् । यिनीहरु धेरै प्रेम गर्ने खालका हुन्छन् । यिनीहरु कसैलाई पनि पीडामा देख्न सक्दैनन् भने झन आफ्नो त साथीलाई कसरी पीडामा देख्न सक्लान् ? यसैले कोही साँचो प्रेमको खोजीमा हुन्छ भने यो राशि भएकाहरु उत्तम रोजाई रहन्छन् । तर यदि कसैको सोचाई पूरानो किसिमको छ भने र आफ्नो साथीलाई सिर्फ स्वयमसम्म मात्र सीमित राख्न चाहन्छ भने कुम्भ राशि सही हुँदैनन् ।
कुम्भ राशिको युवाहरु धेरैजसो आफैमा रहन मन पराउँछन् । यिनीहरुको भित्र धेरै रचनात्मकता हुन्छ तथा यिनीहरु आफ्नो काम स्वयम आफै गर्न चाहन्छन् । यिनीहरु भावुक हुँदैनन् र यसमा आश्चर्य मान्नु पदैन कि कसैको जन्मदिन समेत बिर्सिए भने । प्रेमको देखावटी यिनीहरुलाई फिटिक्कै आउँदैन तरपनि केही अप्रत्याशित हुने संभावनालाई चाहिं इन्कार गर्न सकिंदैन । यस राशिका युवाहरु त्यसलाई अति प्रेम गर्छन् जो यिनीहरुको आशा र भरोसामा खरो रुपमा उत्रन्छन् । यदि यस राशिका युवाले कुनै यस्तो सफट्वयर बनाए जसबाट असीमित सफलता मिले पनि कुनै आश्चर्य मान्नु पर्दैन । कुम्भ राशिका व्यक्तिलाई जान्नु भनेको आफै मा रोमान्चक अनुभवले भरिएको हुन्छ । यदि कुनै विचार तपाईंलाई अद्धभुत लागे सम्झिनु कि यो कुम्भ राशि कै हुनुपर्छ । कुम्भ राशिका युवतीमा समाजलाई आफ्नो इच्छा अनुसार चलाउने क्षमता भएका हुन्छन् । सानातिना कुराको यिनीहरुलाई केही फरक पर्दैन । यिनीहरु धेरैलाई चिन्दछन् तर कोही पनि यिनीहरको नजिकको मित्र हुँदैन । यिनीहरुको अन्दाज अलग हुनछ तथा फेशन तिर झुकाव रहन्छ । यदि साँझमा घुम्न जाने हो भने यिनीहरुलाई फिल्ममा समय गुमाउन मन पर्दैन बरु कहिं अँध्यारेमा बसेर नाटकको मज्जा लिन मनपर्छ । यिनीहरु पढाई गर्छन् भने पनि यिनीहरुको आसपासको वातावरण अलगै हुनेगर्छ । यी युवतीहरु जो कसैको साथ रहन मन पराउँदैनन र चाहँदैनन् पनि ।
यिनीहरु धेरै कम मानिसलाई आफ्नो नजिक आउन दिन्छन् । तर तिनीहरु भाग्यशाली रहन्छन् जो यिनीहरुको जीवनमा प्रवेश गर्न पाउँछन् उनीहरु यिनलाई धेरै रोमान्टिक पाउँछन् । जोसँग यिनीहरु प्रेम गर्छन् उनीहरु यिनहरुसँग आफ्नो कलात्मकता तथा शैक्षिक योग्यता समेत बाँड्छन् । एकपटक कसैलाई प्रेम गर्छन् भने उसको लागि धेरै राम्रो भन्दा राम्रो गर्ने कोशिस गर्छन् । यदि यिनीहरुलाई लाग्छ कि आफ्नो साथी त्यस्तो छैन जुन आफू ले चाहेको होस् तर पनि उसको लागि ती सबै करा गर्छन् जुन उनीहरुले गर्नुपर्ने होस् । कुम्भ राशि बाहेक मिथुन तथा तुला राशिसँग यिनीहरुको आदर्श मित्रता रहन्छ । आफ्नो घुमिरहने बानीको कारण आफू जन्मेको ठाउँबाट टाढै रहन्छन् । यिनीहरु घरमै रहन मन पराउँछन् र खाना बनाउनु तथा घरेलु कार्य गर्नमा झुकाव राख्छन् । खाली समयमा फरक फरक खानको विधी जम्मा गर्छन् । प्रेम तथा विवाह प्रति यिनीहरुको दृष्टिकोण धेरै नै तार्किक हुन्छ । यिनीहरुको आफ्नो बच्चालाई धेरै प्रेम र इज्जतले पालन गर्छन र उनीहरुको सुझावलाई पूरा सम्मान गर्छन् ।
यस राशिका व्यक्तिहरुलाई संक्रमण छिट्टै हुन्छ । धेरैलाई उच्च रक्तचाप, घाँटी तथा मर्किनुको समस्या रहन्छ । हुनत बच्चै देखि खेलप्रति यिनीहरुको झुकाव हुँदैन तर नियमित व्यायाममा ध्यान दिनुपर्छ । तेज हिंड्नु तथा साइक्लिङ्ग उपयुक्त रहन्छ । यिनीहरुलाई यात्रा गर्न मनपर्छ यसैले आरामको बारेमा कम नै सोच्छन् र आराम नै गर्नु परे पनि कितब लिएर ढल्किन मनपर्छ । यिनीहरुको गालाको हड्डी केही उठेको हुन्छ । यिनीहरु आफूलाई धेरै राम्रोसँग तयार गर्नमा विश्वास राख्छन् र यिनीहरुको मुहारको मुस्कान हरेकलाई आकर्षित गर्छ । बच्चै देखि स्वस्थ हुन्छन् र जवान भए पछि पनि पूरा ख्याल राख्छन् तर पनि ताजा हावामा घुम्न तथा रातमा पूरा निन्द्रा सुत्ने कोशिश गर्नुपर्छ ।
यिनीहरु पैशाको लागि धेरै चिन्ता लिंदैनन् । यिनीहरुका बचत धेरै जसो यात्रा गर्नु र दान गर्नमै जान्छ । यिनीहरु यस्तो स्थान खरिद गर्न इच्छुक रहन्छन् जुन शहरी जीवनको भागदौड भन्दा अलग राख्न सकियोस् । यिनीहरुलाई आफ्नो पैशाको बारेमा गम्भिरताले सोच्नुपर्छ नत्र नोक्सान हुनसक्छ । यिनीहरुमा धेरै जसो डाक्टर राम्रो वैज्ञानिक या राम्रो वकिल पनि हुन सक्छन् ।
मीन राशिका व्यक्तिहरुको व्यक्तित्व आकर्षक हुन्छ । यिनीहरु शारीरिक रुपमा धेरै स्वस्थ र बुद्धिमान हुन्छन् । मीनको तात्पर्य माछा हुन्छ र यसको चिन्ह पनि माछाको जोडी हो । मीन राशिकाहरुको आँखा धेरै सुन्दर हुन्छ । यिनीहरुको विचारको आफ्नै एक सीमा हुन्छ । यदि त्यसमा चोट लागे यिनीहरु तड्पिन थाल्छन् र धेरै हदसम्म निराश पनि हुन्छन् । यिनीहरु आध्यात्मिक प्रवृत्तिका हून्छन् । यिनीहरु आदर्श जीवन जीउनमा विश्वास राख्छन् । जुनै पनि काम पूरा तल्लिनताका साथ र निस्वार्थ भावनाले गर्छन् । स्वभाव चंचल हुन्छ । कति पटक यिनीहरुको लागि कल्पना र यथार्थमा फरक गर्न मुश्किल हुन्छ । जसको कारण यिनीहरुको व्यवहार अव्यवहारिक लाग्छ । जब कुनै कुरा आफू अनुकुल हुँदैन तब छिट्टै हार मान्छन् र चिन्तित रहन थाल्छन् । यसैले कैयौं पटक यिनीहरु सुस्त तथा उदास हुन्छन् र दुव्र्यसनमा फस्न पुग्छन् । धार्मिक कार्यमा यिनीहरु रमाउँछन् । स्वभावमा भावुक मीन राशिकाहरुले आफ्नो क्यारियरमा धेरै उतारचढाव भोग्ने गर्छन् । कति पटक कल्पनामा जीउने बानीले कार्यस्थलमा अप्ठ्यारो पर्छ । साना साना कुराले कैयौं पटक मन मनै आहत पनि हुन्छन् जसको कारण अवसादग्रस्त हुने संभावना पनि हुन्छ । यिनहिरुको मानसिक स्वास्थ्य यिनको लागि कार्यस्थलमा चुनौती बनीरहन्छ । कति पटक यिनीहरु रचनात्मक रुपमा आफ्नो भाव पनि अभिव्यक्त गर्छन् । यिनीहरु आफै मा हराइ रहन्छन् र यदि कोही यिनीहरुको जिन्दगीमा आएमा उसैलाई आफ्नो दुनिया सम्झन पुग्छन् । स्वभावमा भावुक मीन राशिको रोमान्टिक जीवन धेरै राम्रो रहन्छ किनकी यिनीहरु आफ्नो प्रेमलाई धेरै चाहन थाल्छन् । जब सामुको व्यक्ति यिनीहरुलाई कल्पनाको दुनियाबाट यथार्थको दुनियामा ल्याउन खोज्छन् तब यिनीहरुको काल्पनिक दुनिया धेरै पटक समस्याको कारण बन्नसक्छ । यिनीहरु सरल र भावुक प्रेमी हुन्छन् र आफ्नो व्यवहार कुशलताले आफ्नो साथीको दिल जित्छन् ।
दयालु प्रवृत्तिका यस राशीका युवा अरुको मद्धत गर्नको लागि कुनै हदसम्म जान सक्छन् । यिनीहरु जानी बुझी कसैलाई पीडा दिन चाहँदैनन् । तथा कुनै लडाईं झगडामा फस्न चाहँदैनन् । यिनीहरुको धेरै समय आफ्नै सपनामा बितने गर्छ । कहिले काहिं त यिनीहरुको दिमागले ठीकसँग काम पनि गर्दैन । यिनीहरु दुनियालाई सँधै गुलाबी चस्माले हेर्छन् र बादको माथि नै घुमि रहन्छन् । यिनीहरु ज्यादा जस्तो एक्लै रहन्छन् । यिनीहरुको मित्र पनि हुँदैनन् । आफ्नो मित्रको चयन धेरै सोच विचार गरेर मात्र गर्छन् । यिनीहरुको लगनशीलताके कमि हुन्छ यसैले आफै माथि भरोसा गर्दैनन् । यिनीहरु गलत मानिसको चक्करमा सजिलै फस्छन् जसको पररिणाम धेरै खतरनाक हुन्छ । यदि यिनीहरुलाई काम गर्न प्रेरित गर्यो भने कुनै त्यस्तो काम छैन जुन यिनीहरुले गर्न नसकुन् । यदि तपाईं चिन्तित हुनुहुन्छ भने मीन राशिका युवतीहरु राम्रो मित्र बन्न सक्छन् । यिनीहरुको दिलमा दया पूरा भरिएको हुनछ । यिनीहरु आफ्नो सारा जीवन समाज सेवा मै बिताई दिन्छन् । यिनीहरुको सारा समय अरुको बारेमै सोचचेर बित्ने गर्छ यसैले आफ्नो बारेमा सोच्ने समय नै हुँदैन । अरुको फुकालेको कपडा लगाएर पनि यिनीहरु खुशी रहन्छन् । किनकी यि युवतीहरु सपनामै हराई रहेका हुन्छन् यसैले यिनीहरु कुनै यात्रामा भए बाटै भुल्छन् । यदि कसैलाई भेट्न जान परे सँधै ढिला पुग्छन् । यिनीहरु सदैव आफ्नो साथीलाई हर संभव मद्धत गर्न तयार रहन्छन यसैले यिनीहरु भित्रको सुन्दरता यिनीहरको रचनात्मकताबाट झल्किन्छ ।
जहाँसम्म रोमान्सको कुरा छ यिनीहरुलाई परी कथाको समान प्रेम गर्नु भन्दा ज्यादा प्रेमको विचार राम्रो लाग्छ । हुनत यिनीहरु सुन्दरतामा आकर्षित हुन्छन् तर यदि यिनीहरुको साथी बुद्धिमान भएन भने यिनीहरुको सारा प्रेम एक मिनेटमा छुमन्तर हुन्छ । वृश्चिक, कर्कट र मीन राशिहरु यिनीहरुको राम्रो साथी प्रमाणित हुन्छन् । मीन राशि भएकाहरु व्यर्थमा जलन र शंका गर्ने खालका हुन्छन् । जसको कारण यिनीहरुको दिल धेरै दुःखी रहन्छ । हुनत यिनीहरुको वैवाहि जीवन राम्रो रहन्छ तर यिनीहरुको व्यवहारले गर्दा कहिले काहिं समस्या पनि आउँछ । यिनीहरुको सम्बन्धमा सबै भन्दा महत्वपूर्ण कुरा भनेको प्रेम हो । यिनीहरु आफ्नो साथी तथा बच्चाको लागि दयालु, भावुक तथा रोमान्टिक हुन्छन् । बाहिरी मानिसको सामु आफ्नो साथीलाई अघि रहन दिन्छन् तर घरमा यिनीहरुकै राज चल्छ । आफ्नो प्रेममय जीवनलाई लामो समय चलाउनको लागि यिनीहरुले कोशिश गर्नुपर्छ कि आफ्नो सम्बन्धलाई प्रेमको धरातलमै खडा गर्ने कोशिश गरुन् ।
मीन राशिमा रंग प्रतिरोधी क्षमता धेरै ढिलो हुन्छ । जसको कारण यिनीहरुको आँखा सुतेको जस्तो रहन्छ । यो बाहेक खानपानको गलत बानीले गर्दा फोक्सो पनि बलियो हुँदैन । यिनीहरुलाई अस्थमा, रुघाखोकी र फ्लुको समस्या हुनसक्छ । जो ठन्डी क्षेत्रमा रहन्छन् उनीहरुले चिसोबाट आफूलाई बचाउने कोशिश गर्नुपर्छ । गला, शिर तथा हात ढाकेर राख्नु राम्रो हुन्छ । धेरै जसोको कदकाठी समान्य रहन्छ । हात लामो र खुट्टा या त धेरै लामो या धेरै छोटो हुन्छ । यदि ध्यान नदिए तौल बढ्न सक्छ । नाकको टुप्पो नजिक अलि मासु हुनु, ठूलो मुख तथा ठूला आँखा यस राशिको विशेषता नै हो । यिनीहरु धेरै जसोमा कलेजो तथा अपचको समस्या रहन्छ । खुट्टामा चोट लाग्ने संभावना रहन्छ । कला, संगीत तथा नुत्यले यिनीहरुको थाकेको मांसपेशीलाई आराम मिल्छ । यस राशिकाहरु मार्शल आर्टमा पनि उत्तम हुनछन् ।
मीन राशिका प्रदर्शन विशेष गरि कला र थियटरमा धेरै राम्रो रहन्छ । भौतिकशास्त्र तथा औषधीको क्षेत्रमा पनि राम्रो हुन्छ । समुन्द्रमा जनावरसँग सम्बन्धीत क्षेत्रमा पनि राम्रो प्रदर्शन गर्छन् । मीन राशिको प्रतिभा यिनीहरुलाई नाम र पैशा दुबै दिलाउँछ । स्वतन्त्रताको तव्रि इच्छा यिनीहरुलाई कसै माथि आश्रित हुन दिंदैन । अप्ठ्रोमा परेका मानिसहरुलाई हर तरिकाको सहयोग गर्नको लागि सधैं तयार रहन्छन् चाहे यिनीहरुलाई थाहा होस् कि यिनीहरुको पैशा फिर्ता आउँदैन । बोर हुनाले कामबाट यिनीहरुको ध्यान हट्न सक्छ र नोक्सानी व्यहोर्न पर्ने हुन्छ । यसैले पूर्णरुपमा केन्द्रित भएर काम गर्ने कोशिश गर्नुपर्छ ।